Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်မှု၏ Neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ: မူးယစ်ဆေးစွဲမှုမှဆက်ဆံရေး (2008) - Porn ပေါ်တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အဆိုပါ Neurobiology နှင့် Impulse Control ကို Disorders ၏မျိုးရိုးဗီဇ: မူးယစ်ဆေးစွဲဖို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2008)
မှတ်ချက်များ - OCD ကိုအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခြင်း။
ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol ။ 2008 ဇန်နဝါရီလ 1; 75(1): 63-75 ။
2007 ဇူလိုင်လ3အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.bcp.2007.06.043
Judson အေဘရူ, MD ပါရဂူဘွဲ့နှင့် မာ့ခ် N. Potenza, MD ပါရဂူဘွဲ့
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol
Impulse ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာရောဂါများ (ICDs) သည်လောင်းကစားခြင်း၊ trichotillomania၊ kleptomania နှင့်အခြားသူများအပါအ ၀ င် impulsive-compulsive spectrum ကို ဖြတ်၍ အိပ်ရန်ကြံစည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လတ်တလောအချက်အလက်များအရဤရောဂါများကိုစွဲလမ်းမှုဟုယူဆနိုင်သည်။ ဒီနေရာတွင်ကျနော်တို့ Impulse ကိုထိန်းချုပ်မမှန်များ၏မျိုးရိုးဗီဇနှင့် neuropathological အခြေစိုက်စခန်းပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဤ Non- နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သီးသန့်မူဘောင်အတွင်းရှိရောဂါစဉ်းစားပါ။
Impulse Control ကို Disorders
ပုံမှန် Impulse Control Disorders (ICDs) အတွက် Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV-TR) မှာရောဂါရှာဖွေခြင်း (PG)၊ kleptomania, pyromania, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲခြင်းရောဂါ၊1] ။ အခြား ICD များ (စည်းကြပ်သောစျေးဝယ်ခြင်း၊ ပြaticနာရှိသည့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှု၊ မဖွယ်မရာလိင်အပြုအမူနှင့်အရေပြားအတင်းအကျပ်ကောက်ယူခြင်း) အတွက်သတ်မှတ်ချက်များကိုအဆိုပြုထားပြီးလက်ရှိတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိသည်။2, 3] ။ ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များရှိသည့်တိကျသောအပြုအမူ (ဥပမာအားဖြင့်လောင်းကစားခြင်း၊ ဆံပင်ဆွဲခြင်း) တွင်ပြတ်ပြတ်သားသားသို့မဟုတ်မဖြစ်မနေပါ ၀ င်ပတ်သက်မှု၊ ပြproblemနာဆိုင်ရာအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်အပြုအမူမ ၀ င်မီတင်းမာမှုသို့မဟုတ်တွန်းအားပေးမှုအခြေအနေတို့ပါဝင်သည်။2].
ICDs ဟာထကြွလွယ်သော compulsive spectrum ကိုတလျှောက်လျစ်လျူရှုခဲ့သည်ဟုယူဆရသည်။4] obsessive-compulsive (OC) spectrum disorders ကိုယ်စားပြုတယ်။5, 6]. ICDs များရှိသူများသည်ထပ်တလဲလဲပြုမူသောအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်လေ့ရှိပြီးမကြာခဏပြင်းထန်သောဆက်နွယ်မှုများရှိသော်လည်းအပြုအမူများသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသည်သို့မဟုတ်အတ္တဆန်ဆန်အဖြစ်ဆက်နွယ်သည်။ [7, 8]. အိုင်စီဒီအက် (စ်) ရှိသူများသည်စိတ်မ ၀ င်စားမှုကိုတိုင်းတာခြင်းနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သောဆက်စပ်သည့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်တွင်များသောအားဖြင့် OCD ရှိသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများကိုမြင့်မားစွာရကြသည်။8-12] ။ PG ကဲ့သို့သော ICD များအတွက် Diagnostic စံသတ်မှတ်ချက်သည်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုနှင့်ထပ်တူကျသည်။ သည်းခံခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်နုတ်ထွက်ခြင်းကိုမအောင်မြင်သည့်ထပ်ခါတလဲလဲကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ဘဝ၏အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။1] ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ICDs နှင့်ပစ္စည်းစွဲများအကြား neurobiological နှင့် genetic ဆင်တူမှုများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ICD များကို“ အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု” အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်"[13-16].
ကျယ်ပြန့်သောသုတေသနကိုစွဲလမ်းမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းရေး၏ neurobiological အထောက်အကူပြုသို့ဖျော်ဖြေခဲ့သည်17-19]) ။ စွဲလမ်းမှုအပေါ်အမြင်အသစ်များသည်အားဖြည့်ခြင်းမှတစ်ဆင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်အပြုအမူများပါ ၀ င်ပြီးဆုလာဘ်အခြေပြုသင်ကြားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့်ပုံမှန် / မဖြစ်မနေထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဆင့်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။19].
စွဲလမ်းမှုအခြေအနေကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်၏အစောပိုင်းအဆင့်များတွင်အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ “ အသစ်သောဆုလာဘ်များကိုသင်ယူပြီးသူတို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်များ” အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအစာစားခြင်းအေးစက်မှုသည်အချိန်နှင့်အမျှစွဲလမ်းစေသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများပါဝင်သည်။20] ။ ဒီအေးစက်ဖြစ်စဉ်ကိုအတွက်အရေးကြီးသောအများအပြား neuroanatomical ဖွဲ့စည်းပုံစိတ်ခံစားမှုအရေးပါမှု၏တာဝန်နှင့်လှုံ့ဆျောမှုသက်ဆိုင်ရာနှင့်မဟုတ်ရင်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများအကြားသင်ယူအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အရေးကြီးသော amygdala ပါဝင်သည် [17, 21တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတွင်ရလဒ်မျှော်မှန်းချက်များကို encode လုပ်ရန်အကြံပြုထားသည်။ basolateral amygdala (BLA) နှင့်ခိုင်မာသည့်ခန္ဓာဗေဒဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများမှတစ်ဆင့် amygdala တွင်တွဲဖက်လေ့လာသင်ယူမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည့် orbitofrontal cortex (OFC)၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းသင်ယူမှုနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်22] ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အရေးကြီးသောအပိုဆောင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများသည် hippocampus ဖြစ်ပြီးစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ဆက်စပ်မှတ်ဉာဏ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသော hypothalamic နှင့် septal nuclei တို့ဖြစ်သည်။23, 24] ။ အတူတူဤနှင့်ဆက်စပ်အဆောက်အ ဦ များလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအခြေခံကြောင်း neurocircuitry ပါဝင်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုရှိသောအပြုအမူများသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်၏တိုးတက်မှုအတွင်းစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောအစဉ်အလာဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှဤဒေသများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအပြောင်းအလဲများသည်အိုင်စီဒီအက်စ်များ၏အဓိကကျသည့်အပြုအမူများတွင်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတွင်အခွံနှင့်အမာခံများပါဝင်သော nucleus accumbens (NAcc) သည်လည်းအရေးကြီးသည်။ အဆိုပါအခွံ, အ ventral tegmental withရိယာနှင့်အတူအပြန်အလှန် innervation ကနေတဆင့်, အဓိကစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ / အခြေအနေအားဖြည့်ခန့်မှန်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်တုန့်ပြန်လေ့လာသင်ယူအပြုအမူများ၏စကားရပ်နှင့်အတူပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်သည်သော်လည်း, စိတ်ခွန်အားနိုးအဓိက modulating အတွက်အရေးကြီးပါသည်17, 19] ။ အဆိုပါ ventral tegmental areaရိယာ (VTA), ယင်း၏ amygdala, NAcc နှင့် prefrontal cortex (OFC နှင့် ACC ပါဝင်သော PFC) မှ၎င်း၏ dopaminergic စီမံကိန်းများနှင့်အတူ phasic dopamine (DA) မှတစ်ဆင့်လေ့လာသင်ယူအသင်းအဖွဲ့များကိုလွယ်ကူချောမွေ့ [25, 26] ။ Dopaminergic အာရုံခံများသည် dorsal medial thalamus (habenula) မှတစ်ဆင့်တားဆီးထားပါသည်။27, 28] ။ ဒါဟာစွဲလမ်းမှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်များတွင်အလေ့အကျင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်လျက်ရှိသော dorsal striatum ပါဝင်သောဆားကစ်များသို့ ctricostriatal ဆားကစ်မှအကူးအပြောင်းဆိုင်ရာအကူးအပြောင်းအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုလွှမ်းမိုးမှုရှိသည် (အောက်တွင်ကြည့်ပါ)29, 30].
အဆိုပါ striatum ကိုအာရုံအဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၊ မော်ဒယ်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည် hippocampus၊ VTA (နှင့် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှ input ကိုလက်ခံခြင်း) မှသွင်းအားစုများမှတစ်ဆင့် NAcc shell တွင်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ကြိုက်အေးစက်မှုနှင့် PFC၊ BLA နှင့် PFC တို့၏သွင်းအားစုများမှတစ်ဆင့် NAcc ၏အဓိကအားဖြည့်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင် sensorimotor cortices နှင့်မိလ္လာကန် hypothalamus ကဲ့သို့သောအခြားဒေသများမှ input မှတစ်ဆင့် dorsal striatum တွင်အလေ့အထကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။19, 23] ။ ဤရွေ့ကားအသွင်ကူးပြောင်းမှုအသီးသီး striatum ၏ limbic, ဆက်စပ်မှုနှင့် sensorimotor ဒေသများပါဝင်သည် (ကြည့်ပါ ကိန်းဂဏန်း 1A) ။ dorsal striatum နှင့် globus pallidus (NAcc core မှ input မှတဆင့်) သည် thalamus အပေါ်တွင်သက်ရောက်သည်။ ထို့နောက် cortical structure သို့ပြန်လည်ကျရောက်စေသည်။ ဒီခန္ဓာဗေဒမူဘောင်အတွင်း, ICDs ၏မျိုးရိုးဗီဇနှင့် neurobiology ပြန်လည်သုံးသပ်နေကြသည်။ အာရုံ၏ကွဲပြားသောအဆင့်များတွင် neurocircuitry နှင့် neurotransmitter ပါ ၀ င်မှုတွင်ထပ်တူကျမှုများရှိနေသော်လည်းဤစနစ်များသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာအသွင်အပြင်ကိုအပြိုင်အဆိုင်ပုံဖော်ထားသည်။
က: စွဲတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ ဦး နှောက် circuitry ။ PFC = prefrontal cortex, VTA = ventral tegmental areaရိယာ, SN = substantia nigra, NAcc = နျူကလိယ accumbens, OFC = orbitofrontal cortex
လူ ဦး ရေ၏စွဲနှင့် ICDs ၏မျိုးရိုးဗီဇ
ပုံမှန်အားဖြင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များမလွဲtoကန်ဖြစ်ရန်အခြေခံအားဖြင့်အားနည်းချက်များကိုဆုံးဖြတ်ပေးသောကြောင့်အနှစ်သာရအားဖြင့်ဗီဇသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွင်ပထမဆုံးပါဝင်မှုကိုပေးသည်။ မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှု ICDs သည်အခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်တူညီသည်။31] ။ မိသားစုနှင့်အမွှာကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအရဗီဇပါ ၀ င်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ ၆၀% အထိရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။32, 33] ။ အလားတူကြံ့ခိုင်မျိုးရိုးဗီဇပံ့ပိုးမှုများကို PG များအတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဗီယက်နမ်ခေတ် Twin (VET) မှတ်ပုံတင်မှအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ မျိုးရိုးဗီဇအချက်အလက်များသည် PG ရှိ DSM-III-R ၏လက္ခဏာပြမှုအတွက်တာဝန်ယူမှု၏ ၃၅% မှ ၅၄% ကြားရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။34] ။ အမွေခံနိုင်မှု၏ဒီဂရီသည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါအပါအဝင်အခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ဆင်တူသည် - တူညီသောနမူနာတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုအတွက်ခြားနားမှု၏ ၃၄% သည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။35] ။ VET မှတ်ပုံတင်၏နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုသည် PG နှင့်အရက်သေစာမှီဝဲမှု၏သမိုင်းကြောင်းကိုစနစ်တကျတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ပြီး PG အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအန္တရာယ်များကိုအရက်မှီခိုမှုနှင့်အတူမျှဝေခဲ့သည်ကိုတိုင်းတာသည်။ စာရေးသူများက subclinical PG (မျိုးရိုးဗီဇ၏ ၁၂ မှ ၂၀% နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏ ၃-၈%) အတွက်အန္တရာယ်ရှိသောသိသာထင်ရှားသည့်အချိုးအစားသည်အရက်ကိုမှီခိုခြင်း၏အန္တရာယ်ဖြင့်တွက်ချက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။36] ။ တူညီသောလူ ဦး ရေကိုလေ့လာမှုပြုရာတွင် Slutske နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် PG နှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားသိသိသာသာဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၊37] ။ ဤလေ့လာမှုများက PG ကဲ့သို့သော ICD များသည်အရက်စွဲမှုနှင့်လူမှုရေးအမူအကျင့်များနှင့်ဆက်နွယ်နေပြီး Impulsivity (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) ကဲ့သို့သောဘုံအခြေခံလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ပဏာမဖြစ်သော်လည်းဤအချက်အလက်များကမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းကဲ့သို့ပင်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်များသည် ICD ၏ရောဂါဗေဒကိုသိသိသာသာအထောက်အကူပြုကြောင်းဖော်ပြသည်။ ICDs တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့် neurotransmitter များနှင့်သက်ဆိုင်သောသီးခြားမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Impulsivity သည်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများစွာအတွက် ICDs နှင့်ဆေးစွဲမှုတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။38] ။ စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစမ်းသပ်မှုကဲ့သို့သောအစောပိုင်းအဆင့်များကိုအထောက်အကူပြုသည်။ စရိုက်လက္ခဏာ Impulsivity အစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်; ဥပမာအားဖြင့်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အစိတ်အပိုင်းလေးခု (အရေးတကြီးမှု၊ ကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲမှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ ဇွဲရှိခြင်းနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းတို့ပါဝင်သည်) ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။39]) သုံးခုကိုဒြပ်ထုအဖြစ်အခြား impulsive အချက်၏ဖွဲ့စည်းထားသောအစီအမံ (Barratt Impulsivity စကေးသိသာမှု, မော်တာနှင့်စီမံကိန်းအစိတ်အပိုင်းများသို့ venturesomeness, ထကြွလွယ်သောနှင့်စာနာဒိုမိန်းသို့ Ezzenck Impulse စကေးအဖြစ်အပိုင်းအစများ [)40, 41]) ။ Moeller နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် Impulsivity ကို“ လျော့နည်းလာခြင်းနှင့်အတူအတွင်းနှင့်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုများကိုလျင်မြန်။ ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိသောတုံ့ပြန်မှုများဆီသို့ ဦး တည်သောကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်” ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။42] ။ " အတူတူ, ဒီတွေ့ရှိချက် Impulse ရှုပ်ထွေးပြီးဘက်စုံတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ တသမတ်တည်း, လူ့နှင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကနေဒေတာတွေကိုမျိုးစုံ ဦး နှောက်ဒေသများနှင့် neurotransmitter စနစ်များကိုစွဲလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက်လုံးထကြွလွယ်သောအပြုအမူတွေကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းအကြံပြု32, 43].
Dopamine, Impulsivity နှင့် ICDs
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း dopamine သည်စွဲလမ်းမှုအစောပိုင်းနှင့်နောက်ပိုင်းရှုထောင့်များတွင်သက်ဆိုင်သည်။ Dopaminergic စနစ်များသည်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ICD များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။ စိတ်ကြွစိတ်ကြွစိတ်ကြွစိတ်ကြွစိတ်ကြွစိတ်ကြွဆေးများသည် dopamine နှင့်အခြားဇီဝဗေဒဆိုင်ရာစနစ်များကိုသြဇာသက်ရောက်ပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity disorder (ADHD) အတွက်ထိရောက်သောကုထုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ NAcc DA စနစ်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်း ADHD တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။44] ။ Dopaminergic စနစ်များသည်စွဲလမ်းစေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းအထောက်အကူပြုသည်။ အမြဲတမ်းအနိမ့် D2 receptor ရရှိနိုင်မှုကိုလည်း detoxification ပြီးနောက်လပေါင်းများစွာကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုအတွက်အစီရင်ခံခဲ့သည်, ဤရရှိမှုထိုကဲ့သို့သော cingulate gyrus ကဲ့သို့သောအခြား ဦး နှောက်ဒေသများအကြား OFC အတွက်ဇီဝြဖစ်လျော့နည်းလာနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် [18, 45] ။ Non- စွဲဘာသာရပ်များအတွက် striatal DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနိမ့်အခြေခံအစီအမံနိမ့် D2 အဲဒီ receptor ရရှိမှုစွဲအားနည်းချက်ဖျန်ဖြေသောအယူအဆကိုထောက်ပံ့ methylphenidate မူးယစ်ဆေးကြိုက်နှစ်သက်ကြိုတင်ခန့်မှန်း  ။ ထောက်ခံမှုများတွင်အလွန်အမင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ကြွက်များ၏ ventral striatum အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်လျော့နည်း D2 အဲဒီ receptor ရရှိမှု (လျော့နည်းလာ receptor နံပါတ်များကိုထက်တိုးမြှင့် DA ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်), ဤရရှိမှုသွေးကြောသွင်းကင်းကိုကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှု၏မြင့်မားသောနှုန်းခန့်မှန်း  ။ striatum တွင် D2 အနိမ့် DXNUMX receptor ရရှိနိုင်မှုသည်မျောက်များမှနောက်ဆက်တွဲကိုကင်းကိုမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်မှုတိုးမြှင့်မည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့သည်48] ။ ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများသည် impulsivity နှင့် ICD များနှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သည်ကိုတိုက်ရိုက်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
DA သည်လောင်းကစားခြင်း၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခြင်းသို့မဟုတ်အားဖြည့်ခြင်းများကိုဖျန်ဖြေနိုင်သည်။ DA သည် PG တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။49] ။ DA ၏အဆင့်များလျော့နည်းလာခြင်းနှင့် ၄ င်း၏မြင့်မားသောပမာဏသည် metabolites 3,4-dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC) နှင့် homovanillic acid (HVA) တို့ကို metabolites လောင်းကစားသူများ၏ CSF တွင်တွေ့ရှိရသည်။50CSF စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုပြင်ဆင်သည့်အခါဤတွေ့ရှိချက်များကိုလေ့လာတွေ့ရှိခြင်းမရှိသော်လည်း 51] ။ Amphetamine, extracellular catecholamine နှင့် 5-HT ပါဝင်မှုကို vesicular ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း၊ DA ပေါင်းစပ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် monoamine oxidase (MAO) မှတစ်ဆင့်တိုးမြှင့်ပေးသောဆေးတစ်ခုဖြစ်သည်။52] ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများအတွက်လောင်းကစားခြင်းအပြုအမူအတွက်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုခြင်း၊53] ။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရ PG ၏ pathophysiology တွင် DA (နှင့် / သို့မဟုတ်အခြား aminergic လမ်းကြောင်းများ) ၏အခန်းကဏ္ suggest သည်အလားတူလုပ်ဆောင်မှုယန္တရားများနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်ထိုအတန်းအတွင်းရှိအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာကိုကင်းအတွက်အမ်ဖီတမင်း) ကိုဆိုလိုသည်။54, 55] ။
အစီရင်ခံချက်များအရပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD) တွင် DA agonist ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်မှုကိစ္စနှင့်အစာစားခြင်းကဲ့သို့သောအခြား ICD အပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။56-60] ။ ICDs အတွက်စစ်ဆေးပြီးလေ့လာခဲ့သော PD လူနာ ၂၇၂ ယောက်ကိုမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောလေ့လာမှုတွင် PG နှင့်အခြား ICD များနှင့် DA DA agonists တို့တွင်အလားတူခိုင်မာသောအသင်းအဖွဲ့များတွေ့ရှိခဲ့သည်။61] ။ PD စတင်ခြင်းမတိုင်မီ ICD ၏သမိုင်းသည်လက်ရှိ ICD နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ နေ့စဉ် levo-dopa နှင့်တူညီသည့်ဆေးများသည် ICD ရှိလူနာများတွင်ဆေးမသောက်သူများထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ PG ၏တစ်သက်တာပျံ့နှံ့မှုအတွက်စစ်ဆေးပြီး PD နှင့်အတူလူနာ ၂၉၇ ယောက်ကိုလေ့လာမှုပြုရာ၌ DA agonist နှင့် PG အကြားဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။62] ။ agonist အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်း levodopa ၏အုပ်ချုပ်မှုနှင့်တွဲဖက်လေ့လာခြင်းအားဖြင့် levodopa ၏စုစုပေါင်းဆေးပမာဏသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြပေးသည်။62] ။ လက်ရှိဒေတာများအရ DA agonists သည်အထူးသဖြင့် ICDs အတွက်အန္တရာယ်ရှိသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်များတွင် PG နှင့်အခြား ICDs များနှင့်ဆက်နွယ်ပြီး DA DA system နှင့် ICDs နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်ဟုဖော်ပြသည်။
မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများသည် DA D4 receptor ကို encoding genes များအပါအ ၀ င် impulsivity နှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော genes များစွာကိုဆက်စပ်ထားသည်။DRD4) နှင့် DA Transporter (SLC6A3) [32, 63, 64] ADHD သည်အလွန်မျိုးရိုးလိုက်ပြီးရောဂါအတွက်အန္တရာယ်၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကိုမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများပေးသည်။ ADHD နှင့်သက်ဆိုင်သောအရှုပ်ထွေးဆုံးမျိုးရိုးဗီဇမူကွဲများမှာ DRD80 နှင့် SLC6A3 မူကွဲ65] ။ DRD5 ကဲ့သို့သောအခြား DA မျိုးဗီဇများသည် ADHD နှင့်လည်းဆက်နွှယ်ခဲ့သည်။65] ။ လေ့လာမှုနှစ်ခု၏ polymorphic ၏အသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် DRD4 PG [နှင့်]66, 67] ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ D2A1 D2 receptor ၏ allele သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၊63, 68] နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ PG နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်နှစ်ဆပိုမိုမြင့်မားကြိမ်နှုန်းမှာတွေ့ရှိခဲ့  ။ အထက်ပါအချက်အလက်များသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာရလဒ်များအရ ICDs နှင့်အခြားစွဲလမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းများကို dopaminergic ထည့်ဝင်မှုတို့ဖြင့်အကြံပြုသည်။ သို့သျောလညျးအပိုဆောင်းလေ့လာမှုများ impulsivity ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအစီအမံမှ DA ပံ့ပိုးမှုများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာမှုများသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအသစ်အဆန်းရှာကြံအဖြစ်သီအိုရီနှင့်ဆက်စပ်ဆောက်လုပ်ရေး DA ဗီဇမူကွဲမှသူတို့ရဲ့ဆကျဆံရေးအတွက်ကွဲပြားရလဒ်များကိုပြသကြပြီအထူးသဖြင့်အဖြစ်, ဒီတွေ့ရှိချက်ပုံတူကူးယူခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ဖို့လိုအပ်နေပါသည်70].
Dopaminergic ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများနှင့် ICD များ - γ-aminobutyric acid (GABA) နှင့် glutamate တို့၏အခန်းကဏ္ R
γ-aminobutyric အက်ဆစ် (GABA) သည် ဦး နှောက်ထဲတွင်အဓိကတားစီးနေသော neurotransmitter ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် glutamate မှအာရုံကြော terminal များတွင်အင်ဇိုင်း glutamate decarboxylase မှဖန်တီးသည်။ GABA နှင့် dopaminergic စနစ်များအကြားခန္ဓာဗေဒနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှုရှိခြင်း၏သက်သေအထောက်အထားများအပြင် GABAergic စနစ်များ၏မော်ဂျူလာသုံးစွဲမှုပြonနာများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်ပံ့ပိုးမှု71] ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖမ်းဆီးရမိခြင်းကိုအဓိကကုသရန်အသုံးပြုသော GABA ပြန်လည်အသုံးပြုမှုကိုတားဆီးပေးသော Tiagabine သည်ကိုကင်းစွဲခြင်း၏ပဏာမထိရောက်မှုကိုပြသခဲ့သည်။72] နှင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီရန်ပြသထားသောအမှုတွဲအစီရင်ခံစာတွင်ပါရှိသည်။73] ။ Glutamate, GABA ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် neurotransmitter နှင့်ရှေ့ပြေးလည်းစွဲနှင့် ICDs များတွင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
preclinical လေ့လာမှုများမှာ, NAcc အတွင်း glutamate အဆင့်ဆင့်ဆုလာဘ် - ရှာဖွေနေအပြုအမူဖျန်ဖြေ  ။ cysteine ​​/ glutamate antiporters မှ nonvesicular glutamate ထုတ်လွှတ်မှုသည် NAcc ရှိ extracellular glutamate ၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်းပြသသည်; က glutamate အုပ်စု 2/3 metabotropic အချိုမှု receptors ၏ဆွမှတဆင့် vesicular အချိုမှုနှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန် modulates [75, 76] ။ N-acetylcysteine ​​(NAC) သည် cysteine ​​လိုလားသောမူးယစ်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် inhibitory metabotropic glutamate receptors ကိုနှိုးဆွပေးခြင်းဖြင့် glutamate ၏ extracellular level ကိုတိုးပွားစေသည်။ ဒါဟာကိုကင်းစွဲနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ပဏာမထိရောက်မှုပြသခဲ့သည်  နှင့် PG  ။ အတူတူယူဒီဒေတာပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲအတွက် glutamatergic နှင့် GABAergic စနစ်များအတွက်ဖြစ်နိုင်သောအခန်းကဏ္suggestကိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
serotonin, Impulse နှင့် ICDs
DA, GABA နှင့် glutamate ကဲ့သို့, serotonin (5-HT) အတွက်အခန်းကဏ္impကို impulsivity, ICDs နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲမှုများတွင်ပံ့ပိုးသည်။ Serotonergic neuron project သည် ဦး နှောက်တစ်လျှောက် dorsal raphe နျူကလိယကို hippocampus, frontal cortex နှင့် amygdala တို့အပါအ ၀ င်ဒေသများသို့ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင် forebrain 5-HT လျော့နည်းမှုသည်မသန်မစွမ်းသောရွေးချယ်မှုဆီသို့ ဦး တည်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးသွယ်ဝိုက် 5-HT agonist fenfluramine သည်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူကိုလျော့နည်းစေသည်။79, 80] ။ ထို့အပြင်ကြွက် raphe ကိုတွေ့ရှိရသောကြောင့်ချက်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးများရရန်ယာယီ ဦး စားပေးသည်။81] ။ အတော်အတန်စိတ်မဝင်စားသော 5-HT ရန်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်သည့်ရွေးချယ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ပြသသည်။82] ။ တိကျတဲ့ serotonin system အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အခန်းကဏ္5သည် XNUMX-HT တွင်ပိုမိုကြီးမားသောမော်တာ impulsivity ၏တွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံသည်1B နောက်ကောက်ကြွက်များ  ။ Tryptophan depletion သည် 5-HT အဆင့်များကိုလျှော့ချပေးသည် (cerebrospinal fluid (CSF) တွင် 5-HT metabolites များလျော့နည်းသွားသည်နှင့်အမျှ)) သည်လူတို့၏မော်တာ impulsivity (စဉ်ဆက်မပြတ်စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုနှင့်တူညီသောအတွဲများ) ကိုတိုးပွားစေသည်။ [84, 85] ။ အရက်အလွန်အကျွံရှိသောမိသားစုသမိုင်းရှိသည့်ဘာသာရပ်များတွင် tryptophan depletion သည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတားစီးမှုကိုလျော့နည်းစေသည် (Stop Task) သို့သော်နှောင့်နှေးခြင်းလျှော့ချခြင်းကိုမလွှမ်းမိုးပါ။84] ။ 5-HT metabolite 5-hydroxyindolacetic acid (5-HIAA) ၏အနိမ့်အဆင့်များကိုထကြွလွယ်သောဝိသေသလက္ခဏာများရှိသူများတွေ့ရသည်။86, 87] နှင့်အစောပိုင်း - စတင်ခြင်းအရက်  ။ CSF 5-HIAA ၏အဆင့်နိမ့်များသည်မျောက်ဝံများရှိစွန့်စားရသည့်အပြုအမူများနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်တောထဲမှာခုန်ပျံတက်နေတဲ့မျောက်တွေ  ။ အတူတကွယူ, အများအပြားသက်သေအထောက်အထားများလိုင်းများ Impulsivity ၏တိကျသောရှုထောင့်မှပံ့ပိုးတိကျတဲ့ 5-HT system ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ပိုသုတေသနလိုအပ်သော်လည်း, 5-HT impulsivity ဖြန်ဖြေအတွက်အခန်းကဏ္ support ထောက်ခံပါတယ်။
5-HT စနစ်များကို ICDs တွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သည်။ PG ရှိအမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိသောသူများနှင့် CSF နမူနာများတွင် 5-HT သို့မဟုတ် 5-HIAA တို့တွင်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများမရှိသော်လည်း50, 89, 90] ပာအချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန် (PG အုပ်စုတွင်တိုးခဲ့သည်)  သည် PG ရှိသူများနှင့် XNUMX-HIAA အဆင့်နိမ့်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။51] ။ Trachodone ၏ metabolite Metachlorophenylpiperazine (m-CPP) သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ စိတ် ၀ င်စားခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့် neuroendocrine လုပ်ဆောင်မှု၏ရှုထောင့်များကိုစေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သော 5-HT receptors (အထူးသဖြင့် 5-HT2c) အတွက်အလွန်ရင်းနှီးမှုရှိသည်။91]) ။ m-CPP ၏အုပ်ချုပ်မှုသည်မြင့်မားသောအမူအကျင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး prolactin အဆင့်တိုးမြှင့်သည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည် (postynaptic 5-HT မှတင်ပြသောဖြစ်စဉ်တစ်ခု)1A / 2A / 2C PG မပါဘဲထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက PG နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက် (receptors)92] ။ ဤပုဂ္ဂလဒိresponse္ဌာန်တုံ့ပြန်မှုသည်လူမှုရေးမဆန်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအပါအ ၀ င်ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ်အနိုင်ကျင့်သောအပြုအမူများထင်ရှားသည့်အခြားရောဂါများတွင်တွေ့ရသည်နှင့်ဆင်တူသည်။93] နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ  ကိုကင်းမှီခိုမှု  နှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုမှု .
pharmacological စိန်ခေါ်မှုများအပြင်, မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများ impulsivity နှင့် ICDs နှစ် ဦး စလုံးအတွက် 5-HT စနစ်ဆက်စပ်ပတ်သက်ပါပြီ။ က TPH1 (tryptophan hydroxylase 1, 5-HT ထုတ်လုပ်မှုတွင်နှုန်း - ကန့်သတ်ထားသောအဆင့်အတွက်အင်ဇိုင်းကို encoding လုပ်သော) ဗီဇမျိုးကွဲ CSF အတွက် 5-HIAA လျှော့ချခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောအကြမ်းဖက်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်သတ်သေမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်  ။ အခြား serotonergic မျိုးရိုးဗီဇ impulsivity နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှစ် ဦး စလုံးနှင့်ဆက်စပ်နှင့်ပါဝင်သည်ပါပြီ SERT (SLC6A4) နှင့် MAOA  ။ လူ့ serotonin Transporter ဗီဇ၏ကမကထဒေသအတွက်တစ် ဦး က polymorphic (SLC6A4) ပရိုတိန်း၏တိုတောင်းသောနှင့်ရှည်လျားသောပုံစံများကို (အတိုပုံစံနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းသောပရိုတိန်းများထုတ်လုပ်ခြင်း) သည်စိတ်ကြွရောဂါဗေဒ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းအပါအ ၀ င်စိတ်ပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်အမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။98-102] သို့သော်လတ်တလောလေ့လာမှုများကဤအသင်းအဖွဲ့များ၏အားသာချက်နှင့်တရားဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။103-105]. SLC6A4 အပြောင်းအလဲသည် ICDs ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည် SLC6A4 ယောက်ျားမဟုတ်ပေမယ့်အမျိုးသမီးများအတွက်တိုတောင်းသော allele နှင့် PG  ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဘာသာရပ်များနမူနာနမူနာများပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုများသည် serotonin နှင့် monoamine oxidase ဗီဇများနှင့် PG၊ compulsive buying and trichotillomania ကဲ့သို့သော ICD များအကြားဆက်နွယ်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။107-109] ။ ပိုကြီးသောနမူနာများနှင့်ဂရုတစိုက် (ဥပမာ၊ ရောဂါရှာဖွေမှု) အကဲဖြတ်မှုများကို အသုံးပြု၍ ထပ်ဆောင်းလေ့လာမှုများကပိုမိုကျယ်ပြန့်သောမိသားစုဝင်များနေထိုင်ရာမိသားစု၏မျိုးရိုးဗီဇကိုစစ်ဆေးရန်ကူညီလိမ့်မည်။
serotonergic အေးဂျင့်များကုသမှုလေ့လာမှုများ ICDs ၏ကုသမှုအတွက်ထိရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ရောထွေးရလဒ်များကို [ပါပြီ110-113] ။ ရွေးချယ်သည့် serotonin ပြန်လည်ထိတွေ့မှုကိုတားဆီးထားသော (SSRIs) ၏ရလဒ်များအရရလဒ်များအရရလဒ်အရရလဒ်များထွက်ပေါ်လာသည်။ အချို့သော RCT များသည်ရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီထက်သာလွန်သည်။114, 115] နှင့်အခြားသူများမ116, 117] ။ လေ့လာမှုအများစုသည်ဆေးဝါးနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီအုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်ကုသမှုအစောပိုင်းတိုးတက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အချို့သောလေ့လာမှုများမှအုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုသည်တက်ကြွသောဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြသော်လည်းဤအကျိုးအမြတ်များသည်ကုသမှုသို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်မူတည်ပြီးတုန့်ပြန်မှုထက်တက်ကြွသောဆေးအတွက်တိတိကျကျရရှိခြင်းကိုသာအကြံပြုသည်။ trichotillomania နှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုများစွာတွင် fluoxetine နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာကုထုံးများအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။111] ။ တက်ကြွသောမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်စပ်သောလိင် drive ကိုသိသိသာသာကျဆင်းမှုရှိခဲ့သည်ပေမယ့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသား 28 အတွက် citalopram vs. ရလဒ်များအရအိပ်ယာကျပန်းလေ့လာမှုမှာတော့အုပ်စုများအကြား compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အစီအမံများတွင်ကွဲပြားမှုတွေ့မြင်  ။ compulsive ဝယ်ယူမှုကုသမှုအတွက် fluvoxamine ၏ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများနှစ်ခု Parallel- လက်, တက်ကြွစွာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာများအကြားမျှခြားနားချက်ပြသ119, 120], ဒါပေမယ့်ကိုးပတ်ကျပန်း၏နောက်တော်သို့လိုက် open-label ကို citalopram ၏ခုနစ်ပတ်ကြာလေ့လာမှုရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တက်ကြွစွာမူးယစ်ဆေးဝါးတိုးတက်မှုပြသ  ။ ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ escitalopram နှင့် SSRI တို့၏ပြeffနာသည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုကုသရာတွင်ထိရောက်မှုရှိသော်လည်းဤရောဂါ၏ကုသမှု (နှင့်ရောဂါရှာဖွေခြင်း) ၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။113] ။ အတူတကွယူဆောင်လာသောအခါတွေ့ရှိချက်များအရ SSRI များသည် ICDs ရှိသူများအတွက်အလုပ်လုပ်သော်လည်းအခြားသူများမဟုတ်ပါ။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရတိကျသောတစ် ဦး ချင်းအင်္ဂါရပ်များ (ဥပမာ၊ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ (သို့) စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကဲ့သို့သောပူးတွဲဖြစ်ပေါ်သောရောဂါများ) သည်သင့်လျော်သောကုသမှုကိုရွေးချယ်ရန်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။122].
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Impulsivity သည် ICD နှင့်ဆေးစွဲမှုနှစ်ခုလုံးကိုအထောက်အကူပြုသည်။ သိပ္ပံနည်းကျလုပ်ဆောင်မှု၏ရှုထောင့်များကဲ့သို့ပင် Impulsivity သည် ICDs များနှင့်ပစ္စည်းစွဲစွဲလမ်းမှုအတွက်ထူးခြားသောပံ့ပိုးမှုများရှိသည်။123] ။ ထို့အပြင် impulsivity ကဲ့သို့ပင် ICD နှင့်ဆေးစွဲမှုအကြားတူညီမှုများသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်ခြင်းကဲ့သို့သောအခြားဒိုမိန်းများတွင်ရှိသည်။ ဤဒိုမိန်းများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
စွန့်စားမှုဆုလာဘ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် Ventral Prefrontal Cortex (PFC)
အပြုအမူသည်အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာသင်ယူမှု၏ကန ဦး အဆင့်များထက်ကျော်လွန်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုသည် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်။ PFC ၏ဒေသများသည်လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုပြdisနာများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ကူညီသည်။ အဆိုပါ OFC ဆုလာဘ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုကုဒ်124, 125] 5-HT စနစ်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခု။ OFC သည်သိပ္ပံနည်းကျပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုရှိစေပြီးအောက်ဖော်ပြပါ amygdala ကဲ့သို့သောဆက်စပ် ဦး နှောက်ဆိုင်ရာ encoding များကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။126] ။ ဒါ့အပြင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြောင်းလဲရာမှာယုတ်ညံ့တဲ့ frontal gyrus / dorsolateral PFC ဟာအရေးကြီးတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး / အပြုအမူတွေကိုစဉ်းစားခြင်းစတဲ့ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုခုခံနိုင်စွမ်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။127] ။ ထပ်နေသော ventromedial PFC (vmPFC) အပါအ ၀ င် OFC သည်အပြောင်းအလဲနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းကိုဆုချသည်။128, 129] ။ vmPFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူဘာသာရပ်များမကြာခဏအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကို ဦး တည်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုမကြာခဏထပ်တလဲလဲ, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအတွက်ဝိသေသလိုငွေပြမှုပြသ  ။ ထို့ပြင်ဤဘာသာရပ်များသည် Iowa Gambling Task (IGT) ရှိနှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များကိုထိန်းချုပ်ခြင်းထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည်။ ယင်းသည်ရေရှည်အကျိုးအမြတ်နှင့်သက်ဆိုင်သောရေရှည်အကျိုးအမြတ်နှင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုကြီးမားသောအမြတ်နှင့်ကြီးမားသောရလာဒ်များနှင့်ဆက်စပ်သောပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသောပြစ်ဒဏ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တီထွင်ခဲ့သောအတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ သက်တမ်းအရှုံး .
ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ပါ ၀ င်သောအရာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် IGT အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်အားနည်းခြင်းရှိသည်။132], နှင့်ဤစွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်း vmPFC နှင့်အခြား cortical ဒေသများသို့သွေးစီးဆင်းမှုလျော့နည်းသွားနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် [133-136] ။ PG ရှိသူများသည် IGT ရှိထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအားနည်းချက်ကိုရွေးချယ်ကြသည်။12, 137] ။ PG ရှိသူများသည်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနှောင့်နှေးသည့်ကြားကာလ (“ နှောင့်နှေးခြင်းလျှော့ချခြင်း”) အရကတိပေးထားသောပိုမိုမြင့်မားသောငွေကြေးဆုများမှချက်ချင်းကတိပြုခဲ့သည့်ပိုမိုနိမ့်သောငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များကိုပိုမိုအလွယ်တကူရွေးချယ်ကြသည်။138] ။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုယာယီလျှော့ချခြင်းသည် PG နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီတွင် comorbid ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုပြordersနာများပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။138] ။ vmPFC ဆားကစ်၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုမူးယစ်ဆေးစွဲ၌ဖြစ်သကဲ့သို့ပုံရသည်အဖြစ်, PG နှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအကြားအပြုအမူ၌ဤကွဲပြားခြားနားမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ လောင်းကစားပစ္စည်းများတင်ဆက်နေစဉ် PG ဘာသာရပ်များတွင် vmPFC ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျသွားသည်။9] Stroop Color-Word Interference Task ၏စွမ်းဆောင်ရည် 139] နှင့်လောင်းကစားခြင်းလောင်းကစားခြင်း  ။ ဒီနောက်ဆုံးလေ့လာမှုမှာ vmPFC ၏ activation သည် PG ဘာသာရပ်များအကြားလောင်းကစားမှုပြင်းထန်မှုနှင့်ပြောင်းပြန်ဆက်စပ်နေသည်။ အတူတကွဤအချက်အလက်များသည် PG ရှိ vmPFC အတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္suggestကိုဖော်ပြသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကဤတွေ့ရှိချက်သည်အခြား ICD များအထိမည်မျှအထိတိုးချဲ့သည်ကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ပစ္စည်း - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီ OFC အတွက်မူမမှန်ပြသပါ။ OFC ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆင်တူသည်၊ လှုံ့ဆော်မှုမှီခိုမှုရှိသည့်ဘာသာရပ်များသည်ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီကြာရှည်စွာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပြုခြင်းဖြင့်စိတ်ကြွဆေးမှီခိုမှုအပေါ်မှီခိုနေရသောဘာသာရပ်များသည်မသင့်တော်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုပြသသည်။141] ။ OFC နှင့် cingulate gyrus တို့၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုမှာကိုကင်းသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။142] ။ အရောင် - စကားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါး Stroop အလုပ်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ညံ့ဖျင်းမှုသည်ကိုကာကိုလာစွဲစွဲသူများ၏ OFC ၏ hypoactivation နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်  ။ အတူတူယူ, ဤအချက်အလက်များကို PFC ၏ဒေသများဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း, Impulse နှင့် Amygdala
amygdala function ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် Impulse မှသိသိသာသာအထောက်အကူပြုသည်။ အဆိုပါ amygdala အသီးသီး raphe နှင့် VTA ထံမှ serotonergic နှင့် dopaminergic input ကိုလက်ခံရရှိနှင့်၎င်း၏ activation အချိုမှု - သွေးဆောင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် GABA-mediated တားစီးအကြားချိန်ခွင်လျှာအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်143, 144] ။ အဆိုပါ amygdala စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မှတ်ဉာဏ်တွင်ပါဝင်။ အဆိုပါ somatic အမှတ်အသားအယူအဆ (ဆုံးဖြတ်ချက်ချ homeostasis, ခံစားမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းညှိသောအာရုံကြောအလွှာအပေါ်မူတည်ကြောင်းဖော်ပြသော) အရ, လှုံ့ဆော်မှုမှအကျိုးသက်ရောက်တုံ့ပြန်မှုထိုကဲ့သို့သော hypothalamus နှင့်အခြားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ brainstem nuclei အဖြစ် visceral မော်တာအဆောက်အ ဦ များမှတဆင့် evoked နေကြသည်  ။ amygdala သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် vmPFC / OFC နှင့် တွဲဖက်၍ ဒေသတစ်ခုစီသည်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံဖြင့်ပံ့ပိုးသည်။ ကြွက်များတွင် BLA ၏ excitotoxic တွေ့ရှိမှုများသည်နှောင့်နှေး - အားဖြည့်လုပ်ငန်းတွင်စိတ်မရှည်သောရွေးချယ်မှုကိုမြှင့်တင်သည်။145] ။ လူသားများတွင် vmPFC ပျက်စီးမှုနှင့် amygdalar ပျက်စီးမှုရှိသူများသည် IGT တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ချို့တဲ့ကြောင်းပြသည်။146] ။ သို့သော်ကြီးမားသောငွေကြေးအမြတ်အစွန်း (သို့) ဆုံးရှုံးမှုများ (အရေပြားစီးဆင်းမှုတုံ့ပြန်မှုဖြင့်တိုင်းတာသည်) သည်အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုများသည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် amygdalar ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဤတုံ့ပြန်မှုများသည် vmPFC ပျက်စီးမှုရှိသည့်လူနာများအတွက်မပျက်စီးပါ။146] ။ သို့သော် anticipatory IGT စွမ်းဆောင်ရည်အတွင်းအရေပြားစီးဆင်းမှုတုန့်ပြန်မှုသည်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံကိုပြသသည် - vmPFC ပျက်စီးမှုနှင့်ပါ ၀ င်သူများသည်အားနည်းချက်များရှိသော်လည်း amygdalar ပျက်စီးမှုရှိသူများသည်ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုကိုပြသည်။ အတူတူ, ပုံမှန်မဟုတ်သော amygdala-ventral striatum လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်သည်တွေကို၏မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကို attribution အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှတဆင့်, စွဲဖြစ်စဉ်များအတွက်ထကြွလွယ်သောသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါဤတွေ့ရှိချက်  ။ မူးယစ်ဆေးစွဲသူများတွင်ပုံကြီးချဲ့သောအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။149] ။ ပုံမှန်မဟုတ်သော amygdalar လှုပ်ရှားမှု 5-HT ဗီဇအတွက်မျိုးရိုးဗီဇမူကွဲကလွှမ်းမိုးနိုင်ပါသည်  ။ ICDs ၌ amygdala ၏အခန်းကဏ္directlyကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
အပြုအမူသည်တက်ကြွစွာသင်ယူခြင်းမှပုံမှန်တုန့်ပြန်မှုသို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှ PFC နှင့် ventral striatum ပါဝင်သော cortico-basal ganglia ကွန်ယက်မှ dorsomedial striatum / caudate သို့ထို့နောက် dorsolateral striatum / putamen သို့ပိုမိုအာရုံခံနိုင်သည့် cortico-basal ganglia ကွန်ယက်သို့ပြောင်းလဲမှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ ကြည့်ပါ ပုံ 1b)  ။ အပြုအမူများအလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခြင်းသည် dorsolateral PFC မှ activation ကိုပြောင်းလဲစေပြီး putud နှင့် motor cortices သို့ပြောင်းသည်။150, 151] ။ စွဲတွင် ထပ်မံ၍ မျောက်များရှိကိုကင်းအုပ်ချုပ်မှုသည် dorsal striatum ၏ပါဝင်မှုနှင့် ventral striatum ကိုသက်ဝင်စေသည့်တိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။152] ။ အပြုအမူသည်ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အခြေပြုလှုံ့ဆော်မှုများဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှစွဲလမ်းစေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများသည်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်လှုပ်ရှားမှုထက်အလေ့အထတုံ့ပြန်မှုကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်။153] ။ ဤကွဲပြားခြားနားသောတုန့်ပြန်မှုသည် NAcc မှ VTA / substantia nigra သို့၎င်း၏ပရောဂျက်မှတဆင့် sensorimotor ကွန်ယက်သို့ dopaminergic ထည့်သွင်းမှုဖြင့်သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့်လွှမ်းမိုးနိုင်သည်154] ။ ရောနှော DA receptor antagonist alpha-flupenthixol ၏ကူးစက်မှုသည် dorsal striatum တွင်မဟုတ်ဘဲ NAcc အမာခံအတွင်းသို့ထိုးသွင်းခြင်း၏စွဲမြဲနေသောတိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်များတွင်တည်ရှိသောကိုကင်းကိုလျှော့ချသည်။155] ။ D2 DA receptors များကိုထိန်းချုပ်မှုကို ventral နှင့် cocaine-teħidသည့်မျောက်များတွင် dorsal striatum တွင်ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊156, 157].
အလေ့အကျင့်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖော်ပြခဲ့သည် ICDs  ။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကဲ့သို့ပင်၊ ဤရောဂါများတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များကိုတိုက်ဖျက်ရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုမလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လောင်းကစားခြင်းကိုလေ့လာခြင်းတွင် PG ရှိသူတစ် ဦး သည်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် striatal activation နှင့်ကွဲပြားမှုကိုပြသခဲ့သည်။140] ။ ကန ဦး အချက်အလက်များအနေဖြင့် PG နှင့်ကိုကင်းမှီခိုမှုအတွက်ကိုကင်းလိုလားမှု၌လောင်းကစားခြင်းများတွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုဆိုလိုသည်။159] ။ ဒီခန္ဓာဗေဒခြားနားချက်၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်စပ်မှုအပိုဆောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလိုအပ်ပေမယ့်အတော်လေးလျော့နည်း putamenal အသံအတိုးအကျယ်, ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက trichotillomania နှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်160] ။ ဤအချက်အလက်များမှကြည့်လျှင်ရည်မှန်းချက်ကိုညွှန်ကြားသည့်လုပ်ရပ်များသည်တက်ကြွစွာသင်ယူခြင်းမှ ICDs တွင်ပိုမိုထိရောက်မှုမရှိသော၊ အလေ့အထအခြေခံသည့်တုံ့ပြန်မှုကိုပစ္စည်း - စွဲစွဲသူများရှိသူများနှင့်ဆင်တူသည့်ပုံစံဖြင့်ကူးပြောင်းသွားသည်ဟုယူဆနိုင်သည်။
စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စဉ်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဆင်းရဲမှုများသည်ဘိန်းနှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုမှုရှိသူများအကြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစေလေ့ရှိသည်။161, 162] ။ Preclinical သက်သေအထောက်အထားများအရစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုသည်အမ်ဖီတမင်းဆေးကဲ့သို့သောဆေးများကိုမိမိဘာသာအုပ်ချုပ်မှုတိုးပွားစေသည်ဟုဖော်ပြသည်။163] ကင်း [164, 165] နှင့်အရက် [166, 167] ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောယန္တရားများသည်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်နာတာရှည်ရောဂါများအဖြစ်ပြန့်ပွားခြင်းတို့တွင်အရေးပါသည်။168] ။ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဆင်တူသည်ကိုနှိုးဆွစေသောအခြေအနေတိုးစေသည်။169] ။ psychostimulants ကဲ့သို့သောအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ [170-172] နှင့်အရက်  စိတ်ဖိစီးမှု circuitry နှင့် HPA ဝင်ရိုးကိုသက်ဝင်။ ကြွက်များတွင် opioids သည် HPA ၀ င်ရိုးကိုလှုံ့ဆော်သည်၊ သို့သော်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလူသားများအပါအ ၀ င်မျောက်ဝံများတွင်တွေ့ရသည် (174]) ။ ထို့အပြင် benzodiazepines သည်လူသားများတွင် HPA activation ကိုလျော့နည်းစေသည်။175] HPA ဝင်ရိုး၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည် mesolimbic dopamine ဂီယာကိုအပြန်အလှန်တိုးစေသဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုသည်ဘုံအာရုံကြောအလွှာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။169] ။ ထိုကဲ့သို့သောထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနှင့်ခြေထောက်အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှု -related လှုံ့ဆော်မှု, NAcc DA လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့် [176, 177] ။ ကုသမှု - စေ့စပ်စွဲတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်တဏှာပါရာဒိုင်းဟာ striatum activate နှင့် anterior cingulate အတွက် activation လျော့နည်းစေသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် prefrontal ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စွဲအတွက်အလေ့အထ circuitry ၏တစ်ပြိုင်နက်တည်းထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်အခန်းကဏ္ suggest အကြံပြုထားသည်178] ။ ဤအပြောင်းအလဲများသည်ထကြွလွယ်သောသို့မဟုတ် / သို့မဟုတ်အားနည်းချက်ရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည်ကိုထပ်မံစုံစမ်းရန်လိုအပ်သည်။179].
ICDs နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လေ့လာမှုများသည်ဤရောဂါများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုရပြီ  ။ ဥပမာအားဖြင့် CSF corticotrophin-releasing hormone (CRH) သည် PG နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်မတူပါ။89] ။ လောင်းကစားရုံများမှစုဆောင်းသောစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများကိုလောင်းကစားကစားသမားများအနေဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်အလားတူတုံ့ပြန်မှုပမာဏပြသသည့်လောင်းကစားသမားများနှင့်အတူလောင်းကစားခြင်းလေ့လာမှုများတွင် cortisol တွင်ယာယီတိုးများလာသည်။181-183] ။ အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဒဏ်ရာကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှုများသောဘဝဖြစ်ရပ်များသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းကဲ့သို့ PG တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။177] ။ အတူတူဤဒေတာများကစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်းများသည် ICDs ၏ရောဂါဗေဒကိုအထောက်အကူပြုသည့်တိကျသောယန္တရားများကိုထပ်မံဆန်းစစ်ရန်အရေးကြီးလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုထားသည်။
Opioids, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ICDs
Opioids သည်အလယ်အလတ် interneurons များတွင်μ opioid receptors ကိုသက်ဝင်စေခြင်းအားဖြင့် VTA တွင် mesolimbic DA လမ်းကြောင်းများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အကျိုးဆက်တိုးမြှင့် DA ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူပင်မအာရုံခံများ (dopaminergic output neuron) တွင် GABA လွှတ်ပေးမှုကိုဟန့်တားစေသောဖြစ်စေသည်။184] ။ သို့သော်အဓိကအာရုံခံဆဲလ်များပေါ်ရှိ opioid receptors များ၏ activation သည်သူတို့၏တိုက်ရိုက်တားစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။185] ။ မကြာသေးမီက opioid receptor activation (κ vs. μ) သည် mesolimbic အာရုံခံများကိုသူတို့၏ပစ်မှတ်များ (Nacc vs. BLA) ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားစွာတားဆီးပေးသည်။186] ။ အဆိုပါ endogenous opioid စနစ်, μနှင့်κ opioid receptors နှစ် ဦး စလုံးမှတဆင့် tonically atypical တုံ့ပြန်မှုစွဲအထောက်အကူပြုကြောင်းအကြံပြုခြင်း, အ HPA ဝင်ရိုးတားစီး။32] ။ ဒီအယူအဆကိုထောက်ခံသည်, mu opioid အဲဒီ receptor ဗီဇကင်းမဲ့သောကြွက် (OPRM1) မော်ဖင်းအကိုက် analgesia သို့မဟုတ်နေရာ preference ကိုမပြပါ187].
အတွက်ပိုလီမာ OPRM1 endorphins မှ binding differential ကို (ဥပမာ, သုံးဆသာ။ ကြီးမြတ်စည်းနှောင်နှင့်အတွင်းပိုင်းပိုတက်စီယမ်ရုပ်သံလိုင်း rectifying ၏ G ကိုပရိုတိန်းနှင့်အတူ activation နှင့်အတူတစ် receptor များအတွက် A118G မူကွဲ codes တွေကို [ဆက်စပ်188]) ။ A118G မူကွဲသည် opioid မှီခိုမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။32], နှင့်ဤမူကွဲနှင့်အတူဘာသာရပ်များအရက်မှီခို၏ကုသမှုများအတွက် naltrexone ပိုမိုအဆင်သင့်တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့ကြသည် [64, 189] ။ အဆိုပါ kappa opioid အဲဒီ receptor ဗီဇ၏ Haplotypes (OPRK1) နှင့်၎င်း၏ endogenous ligand ရှေ့, prodynorphin ၏ကမကထဒေသကိုလည်း opiate မှီခိုနှင့်အခြားစွဲနှင့်ဆက်စပ် [ပါပြီ33].
လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများသည် endogenous opioid β-endorphin ၏အသွေးမြင့်မားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။190] ။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားကိုပေးထားသည်191] နှင့်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုကိုကုသရာတွင်ထိရောက်မှုရှိခြင်း192], opioid အဲဒီ receptor ရန် ICDs ၏ကုသမှုအတွက်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ Naltrexone သည် PG ကိုတစ်နေရာတည်းလေ့လာခြင်းတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်သာလွန်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။193] နှင့်ကြာရှည်စွာပြုမူလုပ်ဆောင်ပေးသော opioid ရန်ဆန့်ကျင်သူ nalmefene သည် PG နှင့်အတူနှစ်ဆမျက်စိကန်းသော multi-centered လေ့လာမှုတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်သာလွန်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။194] ။ Naltrexone သည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာလေ့လာမှုများတွင်အကျိုးရှိသည်။195] နှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ပွင့်လင်း - တံဆိပ်ကပ်စမ်းသပ်မှု  ။ Naltrexone သည်မဝယ်မဝယ်ဝယ်ယူရာတွင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။121] ။ ဤရွေ့ကားဒေတာအကြံပြု opioid စနစ်များကိုဓာတုနှင့်အပြုအမူစွဲနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အရေးကြီးလှသည်။ opioids သည်အာရုံကြောဆိုင်ရာကွန်ယက်များနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လမ်းကြောင်းများစွာအပေါ်သြဇာသက်ရောက်သောကြောင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည် ICDs တွင်၎င်းတို့၏တိကျသောလုပ်ဆောင်မှုယန္တရားများကိုသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
Impulsivity နှင့် ICDs ၏ neurobiology ဆိုင်ရာအချက်အလက်အသစ်များသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ လေ့လာမှုများစွာအရ ICDs များကိုမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်းထက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း (ရှိပြီးသားလေ့လာမှုများတွင် PG ကိုလေ့လာခဲ့သည်)၊ မျိုးရိုးဗီဇ၊ ဤတိုးတက်မှုများရှိသော်လည်း nosology နှင့်တိကျသော ICDs များ၏အခြေခံရောဂါဗေဒနှင့်စပ်လျဉ်း။ အငြင်းပွားမှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
Endophenotypes သည်ရောဂါများနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများအားထိုးထွင်းသိမြင်စေပြီးထိုသတင်းအချက်အလက်များသည်ရောဂါအမျိုးအစားများကိုအသိပေးနိုင်သည်။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာကဲ့သို့စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများ၏ endophenotypic အမြင်များပေါ်ထွက်လာနေကြသည် [197, 198] ။ Endophenotypes များသည်“ မမြင်ရသောမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သောတိုင်းတာနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများ” ဖြစ်ပြီး neuropsychological, endocrinological, cognitive, neuroanatomical or biochemical ။ Endophenotypes သည်ရောဂါဖြစ်စဉ်များကိုအခြေခံသည့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်များအားနားလည်ခြင်းအားတိကျစွာဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုလေ့လာခြင်းထက်စိတ်ရောဂါကုသမှုတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်သဘာ ၀ သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်သော198] ။ ICDs များ၏သဘောသဘာဝနှင့်စရိုက်လက္ခဏာများကိုပိုမိုသိရှိလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများအပေါ် endophenotypic အမြင်များပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Impulse, စိတ်ဖိစီးမှုမှ differential ကို endocrine တုံ့ပြန်မှု, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများကို PG, အခြား ICDs နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲဘို့အရေးကြီးသော endophenotypes ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ endophenotypes များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည်ရောဂါအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (မျိုးရိုးဗီဇအခြေခံခြင်းနှင့်မဟုတ်သော) ခွဲခြားခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်စရိုက်လက္ခဏာ၊ အလားတူ endophenotypic အစီအမံအတွက်အပြောင်းအလဲများ ICDs နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှစ် ဦး စလုံးများအတွက်လက္ခဏာတိုးတက်မှုနှင့်အတူလိုက်ပါသွားမျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ လက်တွေ့ကျကျလက်တွေ့ကျသော endophenotypes သည်ဤရောဂါများ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလမ်းညွှန်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အား ICDs နှင့်ဆေးစွဲမှုများ၏နားလည်မှုကိုပိုမိုနားလည်စေရန်၊ ပိုမိုထိရောက်သောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အပြုအမူနှင့်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာကုသမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်။
Dr. Christopher Pittenger အားဤလက်ရေးမူများဆိုင်ရာစာမူကိုအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနှင့်အထောက်အကူပြုသောမှတ်ချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ စိတ်ပညာနှင့်ဘဝဌာနသုတေသန Varela Grant (JAB)၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျုမှ R32-DA19961 (MNP) နှင့် R01- မှဤသုတေသနအတွက်အထောက်အပံ့ကို NIH ထောက်ပံ့ငွေ T019039-MH01 စိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာလက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသနသင်တန်း (JAB) မှထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ DA020908 (MNP)၊ ယေးလ်တွင်အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးသုတေသန (MNP) နှင့် VA VISN1 MIRECC (MNP) နှင့် REAP (MNP) တို့ဖြစ်သည်။
1. Nomenclature နှင့်စာရင်းအင်းများဆိုင်ရာအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းကကော်မတီ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ။ ၄။ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ - အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း၊4။
2. Grant က J ကို, Potenza MN ။ Impulse ကိုထိန်းချုပ်မမှန်: လက်တွေ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆေးဝါးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004;16: 27-34 ။ [PubMed]
3. Grant JE, Potenza MN ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များ၏ compulsive ရှုထောင့်။ မြောက်အမေရိက၏စိတ်ရောဂါဆေးခန်း။ 2006;29(2): 539-51 ။ x ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4. McElroy SL, Hudson JI, Pope H, Jr, Keck PE, Jr, Aizley HG အခြားနေရာများတွင်ခွဲခြားထားခြင်းမရှိသော DSM-III-R ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာပြdisနာများ - လက်တွေ့လက္ခဏာများနှင့်အခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်မှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1992;149(3): 318-27 ။ [PubMed]
5. Hollander အီး, Wong က CM ။ obsessive-compulsive ရောင်စဉ်ရောဂါ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995;56(ပျော့ပျောင်း 4): 3-6 ။ ဆွေးနွေးခြင်း ၅၃-၅ ။ [PubMed]
6. Hollander အီး, Wong က CM ။ ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစား, နှင့်လိင်မတော်မတရား။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995;56(ပျော့ပျောင်း 4): 7-12 ။ ဆွေးနွေးမှု 13 ။ [PubMed]
7. Grant က J ကို, Potenza MN ။ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်များ၏ compulsive ရှုထောင့်။ စိတ်ရောဂါကုသ N ကိုနံနက်။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
8. Blaszczynski အေရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့် obsessive-compulsive ရောင်စဉ်ရောဂါ။ Psychol ကိုယ်စားလှယ်။ 1999;84(1): 107-13 ။ [PubMed]
9. Potenza MN, Steinberg MA, Skudlarski P, Fulbright RK, Lacadie CM, Wilber MK, et al ။ လောင်းကစားလောင်းကစားခြင်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်တိုက်တွန်း: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;60(8): 828-36 ။ [PubMed]
10 ။ Won Kim က, Grant က je ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားရောဂါနှင့် obsessive-compulsive ရောဂါအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတိုင်းအတာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန။ 2001;104(3): 205-212 ။ [PubMed]
11 ။ Petry မိုင်။ ပြproblemနာမရှိသောလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပြproblemနာမရှိသောလောင်းကစားပစ္စည်းများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းများတွင်စိတ်ရောဂါလက္ခဏာများ။ စွဲအပေါ်အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2000;9(2): 163-171 ။ [PubMed]
12 ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားလူနာအတွက် Cavedini P ကို, Riboldi, G, Keller R ကို, Annucci တစ် ဦး က, Bellodi အယ်လ် Frontal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ဟားဗတ်။ 2002;51(4): 334-341 ။ [PubMed]
13 ။ Potenza M. စွဲလမ်းစေသောရောဂါများတွင်ပစ္စည်းမဟုတ်သောအခြေအနေများပါ ၀ င်သင့်သလား။ စွဲလမ်း။ 2006;101(ပျော့ပျောင်း 1): 142-51 ။ [PubMed]
14 ။ Shaffer HJ ။ ထူးဆန်းတဲ့ bedfellows: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်စွဲမှုတစ်ခုဝေဖန်အမြင်။ စွဲလမ်း။ 1999;94(10): 1445-8 ။ [PubMed]
15 ။ Holden C. 'အပြုအမူ' စွဲချက်များ - သူတို့တည်ရှိနေသလား။ သိပ္ပံ။ 2001;294(5544): 980-2 ။ [PubMed]
16 ။ je, ဘရူဂျာ Potenza MN ပေးသနား။ ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ neurobiology ။ CNS Spectrum ။ 2006;11(12): 924-30 ။ [PubMed]
17 ။ Kalivas PW, Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;162(8): 1403-13 ။ [PubMed]
18 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ ။ ဦးနှောက်ဆားကစ်နှင့်ကုသမှုမဟာဗျူဟာ: အဆိုပါစွဲလူ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ၏အလင်း၌ရှုမြင်ကြသည်။ Neuropharmacology ။ 2004;47(ပျော့ပျောင်း 1): 3-13 ။ [PubMed]
19 ။ Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ် neuroscience ။ 2005;8(11): 1481-1489 ။ [PubMed]
20 ။ Martin-Soelch C၊ Linthicum J, Ernst M. အစာစားချင်စိတ်အခြေအနေ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒအတွက်အာရုံကြောများနှင့်သက်ရောက်မှုများ။ neuroscience နှင့် biobehavioral ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2007;31(3): 426-40 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21 ။ Everitt BJ၊ Cardinal RN, Parkinson JA, Robbins TW ။ Appetitive အပြုအမူ: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ယူမှု၏ amygdala- မှီခိုယန္တရားများ၏သက်ရောက်မှု။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2003;985: 233-50 ။ [PubMed]
22 ။ ပါကင်ဆန်ဂျေအေ၊ Cardinal RN၊ Everitt BJ ။ appetitive အေးစက်အခြေခံ Limbic cortical-ventral striatal စနစ်များ။ ဦးနှောက်သုတေသနအတွက်တိုးတက်မှုကို။ 2000;126: 263-85 ။ [PubMed]
23 ။ ကုန်သည်များ R ကို, တေလာ JR, Potenza MN ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်လှုံ့ဆျောမှု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်တစ်ခုအရေးပါသောကာလ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160: 1041-1052 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ Swanson LW ။ လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူ၏နှောက် hemisphere စည်းမျဉ်း။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2000;886(12): 113-164 ။ [PubMed]
25 ။ Mirenowicz J ကို, မျောက် dopamine အာရုံခံအတွက်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုအဘို့ခန့်မှန်းရခက်၏ Schultz ဒဗလျူအရေးပါမှု။ neurophysiology ၏ဂျာနယ်။ 1994;72(2): 1024-7 ။ [PubMed]
26 ။ Schultz ဒဗလျူအပြုအမူသီအိုရီနှင့်ဆုလာဘ်များ neurophysiology ။ စိတ်ပညာ၏နှစ်ပတ်လည်ပြန်လည်သုံးသပ်။ 2006;57: 87-115 ။ [PubMed]
27 ။ Christoph GR, Leonzio RJ, Wilcox KS ။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက် habenula ၏လှုံ့ဆော်မှုသည် dopamine ပါဝင်သောအာရုံခံဆဲလ်များကို sustia nigra နှင့်ကြွက်၏ ventral tegmental inရိယာတွင်တားဆီးပေးသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1986;6(3): 613-9 ။ [PubMed]
28 ။ Ullsperger M, von Cramon DY ။ ပြင်ပမှတုန့်ပြန်ချက်များကို အသုံးပြု၍ စောင့်ကြည့်နေသည့်အမှား - အလုပ်လုပ်နေသောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အားဖြင့်ဖော်ပြသော habenular ရှုပ်ထွေးသောအခန်းကဏ္,၊ ဆုလာဘ်စနစ်နှင့် cingulate motor area ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003;23(10): 4308-14 ။ [PubMed]
29 ။ ယဉ်ဟင်, Knowlton BJ ။ အလေ့အထဖွဲ့စည်းရေးအတွက် Basal ganglia ၏အခန်းကဏ္.ကို။ သဘာဝတရားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2006;7(6): 464-76 ။ [PubMed]
30 ။ Baler RD, Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ: နှောင့်အယှက် Self-ထိန်းချုပ်မှုများ neurobiology ။ မော်လီကျူးဆေးပညာအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 2006;12(12): 559-566 ။ [PubMed]
31 ။ Lobo DS, ကနေဒီ JL ။ လောင်းကစားနှင့်အမူအကျင့်စွဲခြင်း၏မျိုးရိုးဗီဇ။ CNS Spectrum ။ 2006;11(12): 931-9 ။ [PubMed]
32 ။ Kreek MJ, Nielsen DA, Butelman ER, LaForge KS ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲဖို့ Impulse, အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အားနည်းချက်အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှု။ သဘာဝတရားမှ neuroscience ။ 2005;8(11): 1450-7 ။ [PubMed]
33 ။ Kreek MJ၊ Bart G၊ Lilly C၊ LaForge KS, Nielsen DA ။ Pharmacogenetics နှင့် opiate နှင့်ကိုကင်းစွဲနှင့်သူတို့၏ကုသမှု၏လူ့မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ။ Pharmacological ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 2005;57(1): 1-26 ။ [PubMed]
34 ။ Eisen SA, Lin N, Lyons MJ, Scherrer JF, Griffith K သည်, True WR, et al ။ လောင်းကစားအပြုအမူအပေါ်မိသားစုလွှမ်းမိုးမှု: 3359 အမွှာအားလုံးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စွဲလမ်း။ 1998;93(9): 1375-84 ။ [PubMed]
35 ။ Tsuang MT, Lyons MJ, Eisen SA, Goldberg J, True W, Lin N, et al ။ DSM-III-R ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်မှီခိုမှုအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှု ၃,၃၇၂ အမွှာတွဲလေ့လာမှု။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ။ 1996;67(5): 473-7 ။ [PubMed]
36 ။ Slutske WS, Eisen S က, စစ်မှန်သော WR, လီယွန် MJ, Goldberg က J ကို, အမျိုးသားများတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အရက်မှီခိုဘို့ Tsuang အမ်အဖြစ်များသည့်မျိုးဗီဇအားနည်းချက်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;57(7): 666-73 ။ [PubMed]
37 ။ Slutske WS, Eisen S, Xian H, True WR, Lyons MJ, Goldberg J ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်လူမှုရေးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအကြားဆက်စပ်မှု၏တစ် ဦး အမွှာလေ့လာမှု။ ပုံမှန်မဟုတ်သောစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2001;110(2): 297-308 ။ [PubMed]
38 ။ Evenden JL ။ Impulse ၏အမျိုးပေါင်း။ Psychopharmacology ။ 1999;146(4): 348-61 ။ [PubMed]
39 ။ Whiteside SP, Lynam DR ။ အချက်ငါးချက်ပါသောမော်ဒယ်နှင့်လှုံ့ဆော်မှု - ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနားလည်ရန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်း ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ။ 2001;30(4): 669-689 ။
40 ။ Patton JH စတန်းဖို့ဒ်က MS, Barratt ES ။ အဆိုပါ Barratt Impulse စကေး၏ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1995;51(6): 768-74 ။ [PubMed]
41 ။ Eysenck SB, Eysenck HJ ။ ထကြွလွယ်သောနှင့် venturesomeness: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖော်ပြချက်တစ်ခုရှုထောင်စနစ်ကသူတို့ရဲ့အနေအထား။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ 1978;43(3 Pt 2): 1247-55 ။ [PubMed]
42 ။ Moeller အပြည်ပြည်သွား, Barratt ES, Dougherty DM, Schmitz JM, Swann AC အ။ Impulse ၏စိတ်ရောဂါရှုထောင့်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;158(11): 1783-93 ။ [PubMed]
43 ။ Cardinal RN, Winstanley, CA, Robbins TW, Everitt BJ ။ Limbic corticostriatal စနစ်များနှင့်နှောင့်နှေးအားဖြည့်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004;1021: 33-50 ။ [PubMed]
44 ။ Sagvolden T က, တပ်ကြပ်ကြီးဂျေအေ။ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု / hyperactivity disorder - ဦး နှောက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှအပြုအမူအထိ။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 1998;94(1): 1-10 ။ [PubMed]
45 ။ et al Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ, Hitzemann R, Logan J, Schlyer DJ ။ dopamine D2 receptor ရရှိနိုင်မှုလျော့ကျခြင်းသည်ကိုကာကိုလာအလွဲသုံးစားပြုသူများ၏တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ၂ ။ ၁၄ ။ နယူးယောက်, NY:2စစ 14-1993 ။ ။
46 ။ et al Volkow ND, Wang GJ, Fowler JS, Thanos PP, Logan J, Gatley SJ ။ Brain DA D2 receptors သည်လူတို့၏စိတ်ကြွဆေး၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ပုံတူပွားခြင်း။ ၂ ။ ၁၄ ။ နယူးယောက်, NY:2စစ 46-2002 ။ ။
47 ။ Dalley JW, Fryer TD, Brichard L, Robinson ESJ, Theobald DEH, Laane K, et al ။ Nucleus Accumbens သည် D2 /3Receptors များသည် Trait Impulsivity နှင့် Cocaine Reinforcement ကိုခန့်မှန်းသည်။ သိပ္ပံ။ 2007;315(5816): 1267-1270 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
48 ။ et al Nader MA, Morgan: D, Gage HD, Nader SH, Calhoun TL, Buchheimer N ။ dopamine D2 receptors ၏ PET ပုံရိပ်သည်ရှည်လျားသောမျောက်များမှကိုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကာလအတွင်း။ နတ် neuroscience ။ 2006;9(8): 1050-1056 ။ [PubMed]
49 ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၌ DeCaria C၊ Begaz T၊ Hollander E. Serotonergic နှင့် noradrenergic လုပ်ဆောင်ချက်။ CNS Spectrum ။ 1998;3(6): 38-47 ။
50 ။ Bergh ကို C, Eklund T က, Sodersten P ကို, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် Nordin C. ALTER dopamine function ကို။ Psychol Med ။ 1997;27(2): 473-5 ။ [PubMed]
51 ။ ရောဂါဗေဒအထီးလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် Nordin ကို C, E တီပြောင်းလဲ CSF 5-HIAA dospositon ။ CNS Spectrum ။ 1999;4(12): 25-33 ။ [PubMed]
52 ။ Sulzer D၊ MS S၊ S Poulsen NW၊ amphetamines မှ neurotransmitter လွှတ်ပေးသည့် Galli A. ယန္တရားများ - သုံးသပ်ချက်။ Neurobiology အတွက်တိုးတက်မှုကို။ 2005;75(6): 406-433 ။ [PubMed]
53 ။ Zack M က, Poulos CX ။ အမ်ဖီတမင်းသည်ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများအတွက်လောင်းကစားခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆိုင်သော semantic ကွန်ယက်များကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2004;29(1): 195-207 ။ [PubMed]
54 ။ Shalev U၊ Grimm JW၊ ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းရှာဖွေခြင်းမှပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏ရှာဟီယာ Neurobiology: ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်။ Pharmacol ဗျာ 2002;54(1): 1-42 ။ [PubMed]
55 ။ Loba P, Stewart SH, Klein RM, Blackburn JR ။ စံဗီဒီယိုထီ terminal (VLT) ဂိမ်းများ၏အင်္ဂါရပ်များကိုင်တွယ်ခြင်း - ရောဂါဗေဒနှင့်ရောဂါဗေဒမဟုတ်သည့်လောင်းကစားသမားများ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Gamble လုံး။ 2001;17(4): 297-320 ။ [PubMed]
56 ။ Weintraub: D, Potenza MN ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ Impulse Control Disorders ။ လက်ရှိအာရုံကြောနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံအစီရင်ခံစာများ။ 2006;6(4): 302-6 ။ [PubMed]
57 ။ Kurlan R. ပါကင်ဆန်ရောဂါထပ်တလဲလဲသောအပြုအမူများကိုပိတ်ခြင်း။ MOV disorders ။ 2004;19(4): 433-7 ။ [PubMed]
58 ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine agonist ကုထုံးနှင့်ဆက်စပ်သော Driver-Dunckley E၊ Samanta J, Stacy M. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း။ အာရုံကြော။ 2003;61(3): 422-423 ။ [PubMed]
59 ။ Dodd ML, Klos KJ, Bower JH, Geda YE, Josephs KA, Ahlskog JE ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါကုသရာတွင်အသုံးပြုသည့်ဆေးဝါးများကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း။ Arch Neurol ။ 2005;62(9): 1377-1381 ။ [PubMed]
60 ။ Szarfman A, Doraiswamy PM, Tonning JM, Levine JG ။ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုးရွားသောအဖြစ်အပျက်ဒေတာဘေ့စ်တွင်တွေ့ရှိရသောရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပါကင်စတုန်းကုထုံးအကြားအသင်းအဖွဲ့။ Arch Neurol ။ 2006;63(2): 299a-300 ။ [PubMed]
61 ။ Weintraub: D, Siderowf အေဒီ၊ Potenza MN, Goveas J, Morales KH, Duda JE, et al ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine agonist ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆက်စပ်မှု။ အာရုံကြော၏မော်ကွန်း။ 2006;63(7): 969-73 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
62 ။ Voon V, Hassan K, Zurowski M, Duff-Canning S, de Souza M, Fox S, et al ။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆေးဝါးအသင်း၏အလားအလာပျံ့နှံ့မှု။ အာရုံကြော။ 2006;66(11): 1750-2 ။ [PubMed]
63 ။ Haile CN, Kosten TR, Kosten TA ။ dopamine ၏မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ကိုကင်းစွဲရန်၎င်း၏အလှူငွေ။ အပြုအမူမျိုးရိုးဗီဇ။ 2007;37(1): 119-45 ။ [PubMed]
64 ။ Kreek MJ၊ Nielsen DA၊ LaForge KS ။ စွဲနှင့်ဆက်စပ်မျိုးဗီဇ: အရက်, opiate နှင့်ကိုကင်းစွဲ။ Neuromolecular ဆေးဝါး။ 2004;5(1): 85-108 ။ [PubMed]
65 ။ et al Swanson JM, Kinsbourne M, Nigg J, Lanphear B, Stefanatos GA, Volkow N ။ အာရုံစူးစိုက်မှု - လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ၏ Etiologic အမျိုးအစားခွဲများ: ဦး နှောက်ပုံရိပ်, မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များနှင့် dopamine အယူအဆ။ အာရုံကြောစိတ်ပညာပြန်လည်သုံးသပ်။ 2007;17(1): 39-59 ။ [PubMed]
66 ။ ဖာဇန်ဒါအက်စ်၊ တာရာစ် P၊ Saiz-Ruiz J၊ ဖာနန်ဒက်ဇ - ပီကာရတ်ဂျီမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုသည်လောင်းကစားခြင်းနှင့် D4 receptor gene ရှိအလုပ်လုပ်သော DNA polymorphism အကြားလေ့လာမှုဖြစ်သည်။ Pharmacogenetics ။ 1997;7(5): 345-8 ။ [PubMed]
67 ။ လာတဲ့ DE, Gonzalez N, Wu S, Gade R, Muhleman: D, Saucier, G ။ TDrette Syndrome, ADHD, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအတွက် DRD48 ဗီဇ၏4bp ထပ်ခါတလဲလဲ polymorphic ၏လေ့လာမှုများ impulsive, compulsive, စွဲလမ်းအပြုအမူအတွက်လေ့လာမှုများ။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ။ 1999;88(4): 358-68 ။ [PubMed]
68 ။ Blum K၊ Sheridan PJ၊ Wood RC၊ Braverman ER, Chen TJ, Comings DE ။ Dopamine D2 အဲဒီ receptor ဗီဇမူကွဲ: ထကြွလွယ်သော - စွဲလမ်း - compulsive အပြုအမူအတွက်အသင်းအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများ။ Pharmacogenetics ။ 1995;5(3): 121-41 ။ [PubMed]
69 ။ လာ DE, Rosenthal RJ, Lesieur HR, Rugle LJ, Muhleman: D, chiu ကို C, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇ၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ Pharmacogenetics ။ 1996;6(3): 223-34 ။ [PubMed]
70 ။ Gelernter J, Kranzler H, Coccaro E, Siever L, New A, Mulgrew CL ။ D4 dopamine-receptor (DRD4) alleles နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမှီခိုခြင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး - ရောဂါနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များအတွက်ရှာဖွေခြင်းအသစ်များ။ နံနက် J ကို Hum မျိုးရိုးဗီဇ။ 1997;61(5): 1144-52 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
71 ။ Sofuoglu M က, Kosten TR ။ ကိုကင်းစွဲလမ်းတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ဆေးဝါးဗေဒမဟာဗျူဟာပေါ်ထွက်လာ။ ထွန်းသစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်ကျွမ်းကျင်သူအမြင်။ 2006;11(1): 91-8 ။ [PubMed]
72 ။ Gonzalez, G, Desai R, Sofuoglu M, Poling J, Oliveto A, Gonsai K ။ ကိုကိုးမှီခို methadone- ကုသလူနာအကြားကိုကင်းအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချဘို့ gabapentin နှင့် tiagabine နှိုင်းယှဉ်၏လက်တွေ့ထိရောက်မှု။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2007;87(1): 1-9 ။ [PubMed]
73 ။ Kaufman KR, Kugler SL, Sachdeo RC ။ Postencephalitic ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့် Impulse Control Disorder ၏စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် Tiagabine ။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်အပြုအမူ။ 2002;3(2): 190-194 ။ [PubMed]
74 ။ McFarland K ကို Lapish CC ကို, Kalivas PW ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏အဓိကသို့ Prefrontal အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူကိုကင်း-သွေးဆောင် reinstatement mediates ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003;23(8): 3531-7 ။ [PubMed]
75 ။ Baker DA၊ Xi ZX၊ Shen H၊ Swanson CJ, Kalivas PW ။ in vivo nonsynaptic glutamate ၏မူလနှင့်အာရုံခံ function ကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2002;22(20): 9134-41 ။ [PubMed]
76 ။ Hu, D, Duffy P, Swanson C, Ghasemzadeh MB, Kalivas PW metabotropic အချိုမှု receptors အားဖြင့် dopamine ဂီယာ၏စည်းမျဉ်း။ ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ဆဲဟော်မုန်းများ၏ဂျာနယ်။ 1999;289(1): 412-6 ။ [PubMed]
77 ။ et al Larowe SD က, Mardikian P ကို, Malcolm R ကို, Myrick H ကို, Kalivas P ကို, McFarland K ကို။ ကိုကိုး - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် N-acetylcysteine ​​၏လုံခြုံမှုနှင့်သည်းခံစိတ်။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2006 ဇန်နဝါရီ-ဖေဖော်ဝါရီ;15(1): 105-10 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
78 ။ je ကင်မ် SW, Odlaug BL ပေးသနား။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှုအတွက် N-Acetyl Cysteine, တစ် ဦး glutamate-Modulating Agent: ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ 2007 [PubMed]
79 ။ Poulos CX, က Parker JL, Le အေဒီ။ Dexfenfluramine နှင့် 8-OH-DPAT တို့သည်နှောင့်နှေးခြင်း -of ဆုလာဘ်ပါရာဒိုင်းတွင်အလိုလိုက်ခြင်းကို modulate: အရက်သုံးစွဲမှုနှင့်စာပေးစာယူအတွက်သက်ရောက်မှုများ။ 1996;7(4): 395-399 ။ [PubMed]
80 ။ Mobini S, Chiang TJ, Al-Ruwaitea AS, Ho MY, Bradshaw CM, Szabadi E. အလယ်ပိုင်း ၅-hydroxytryptamine ကုန်ခန်းမှု၏သက်ရောက်မှုများ - ယာယီကြားဖြတ်ရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ခြင်းအပေါ်အရေအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။ Psychopharmacology ။ 2000;149(3): 313-8 ။ [PubMed]
81 ။ Bizot J၊ Le Bihan C၊ Puech AJ, Hamon M, Thiebot M. Serotonin နှင့်ကြွက်များတွင်ဆုအတွက်နှောင့်နှေးခြင်းအပေါ်သည်းခံခြင်း။ Psychopharmacology ။ 1999;146(4): 400-12 ။ [PubMed]
82 ။ Evenden JL၊ ရိုင်ယန် CN ။ ကြွက်များတွင်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူ၏ဆေးဝါးဗေဒ: အားဖြည့်၏အမျိုးမျိုးသောနှောင့်နှေးနှင့်အတူတုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်မှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology ။ 1996;128(2): 161-70 ။ [PubMed]
83 ။ Brunner D, Hen R. ထိုးထွင်းသိမြင်မှု serotonin receptor နောက်ကောက်ကြွက်များထံမှတက်ကြွသောအပြုအမူ၏ neurobiology သို့ထိုးထွင်းသိမြင်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 1997;836: 81-105 ။ [PubMed]
84 ။ Crean J၊ Richards JB၊ de Wit H. Effect သည်မိသားစုအတွင်း၌အရက်သမားဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်မပါ ၀ င်သောယောက်ျားများအတွက်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများအပေါ် tryptophan လျော့နည်းသွားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အမူအကျင့်ကဦးနှောက်သုတေသန။ 2002;136(2): 349-57 ။ [PubMed]
85 ။ Walderhaug E၊ Lunde H၊ Nordvik JE, Landro NI, Refsum H, Magnusson A. Serotonin ကိုလျင်မြန်စွာ tryptophan လျော့နည်းသွားခြင်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏စိတ်မသက်မသာမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ Psychopharmacology ။ 2002;164(4): 385-91 ။ [PubMed]
86 ။ Linnoila M, Virkkunen M, Scheinin M, Nuutila A, Rimon R, Goodwin FK ။ အနိမ့် cerebrospinal အရည် 5-hydroxyindoleacetic acid ကိုအာရုံစူးစိုက်မှု nonimpulsive အကြမ်းဖက်အပြုအမူကနေထကြွလွယ်သောခွဲခြား။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1983;33(26): 2609-14 ။ [PubMed]
87 ။ Coccaro EF, Siever LJ, Klar HM, Maurer G, Cochrane K, Cooper TB, et al ။ ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါများနှင့်အတူလူနာ Serotonergic လေ့လာမှုများ။ သတ်သေခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောရန်လိုသောအပြုအမူများနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1989;46(7): 587-99 ။ [PubMed]
88 ။ Mehlman PT, Higley JD, Faucher I, Lilly AA, Taub DM, Vickers J စသည်တို့။ CSF 5-HIAA အနိမ့်အမြင့်များနှင့်ပြင်းထန်သောကျူးကျော်မှုနှင့်လူသားမဟုတ်သောမျောက်များတွင်ဒေါသစိတ်များထိန်းချုပ်မှုအားနည်းခြင်း။ Psychiatry ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1994;151(10): 1485-91 ။ [PubMed]
89 ။ et al ရွိုင်း A, Adinoff B, Roehrich L, Lamparski: D, Custer R, Lorenz V ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား။ တစ် ဦး က psychobiological လေ့လာမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1988;45(4): 369-73 ။ [PubMed]
90 ။ Roy A, De Jong J, Linnoila အမ် Extraversion ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း။ noradrenergic function ကို၏အညွှန်းကိန်းနှင့်အတူဆက်စပ်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1989;46(8): 679-81 ။ [PubMed]
91 ။ Kennett GA, Curzon G. အအထောက်အထား mCPP နှင့် TFMPP အားဖြင့်သွေးဆောင် hypophagia 5-HT1C နှင့် 5-HT1B အဲဒီ receptors လိုအပ်သည်ကြောင်း; RU 24969 အားဖြင့်သွေးဆောင် hypophagia သာ 5-HT1B receptors လိုအပ်သည်။ Psychopharmacology (Berl) 1988;96(1): 93-100 ။ [PubMed]
92 ။ Pallanti S ကို, ဘာနာဒီက S, Quercioli L ကို, DeCaria ကို C, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် Holland အီး serotonin ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်ပါးစပ်မီတာ-CPP ကမှ prolactin တုံ့ပြန်မှုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ CNS Spectrum ။ 2006;11(12): 956-64 ။ [PubMed]
93 ။ မော့စ် HB, Yao JK, Panzak GL ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူ antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက် Serotonergic တုံ့ပြန်မှုနှင့်အမူအကျင့်အတိုင်းအတာ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1990;28(4): 325-38 ။ [PubMed]
94 ။ Hollander အီး၊ De Caria C၊ Stein D၊ Simeon D, Cohen L, Hwang M, et al ။ m-CPP သို့အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994;35(6): 426-7 ။ [PubMed]
95 ။ Buydens-Branchey L, Branchey M, Fergeson P, Hudson J, McKernin C. ကိုကင်းသုံးစွဲသူများတွင် Meta-chlorophenylpiperazine စိန်ခေါ်မှုစမ်းသပ်မှု - ဟော်မုန်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု။ ဟားဗတ်။ 1997;41(11): 1071-86 ။ [PubMed]
96 ။ နာတာရှည်အရက်လူနာများအတွက် serotonergic တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist m-chlorophenylpiperazine ၏ Benkelfat C, Murphy DL, Hill JL, George DT, Nutt D, Linnoila အမ် Ethanollike ဂုဏ်သတ္တိများ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991;48(4): 383 ။ [PubMed]
97 ။ et al Nielsen DA, Virkkunen M, Lappalainen J, Eggert M, Brown GL, Long JC ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုနှင့်အရက်သေစာအတွက် tryptophan hydroxylase ဗီဇအမှတ်အသား။ ယေဘုယျ Psychiatry ၏မော်ကွန်း။ 1998;55(7): 593-602 ။ [PubMed]
98 ။ Lesch KP, Bengel D, Heils A, Sabol SZ, Greenberg BD, et al ။ အဆိုပါ serotonin Transporter ဗီဇစည်းမျဉ်းဒေသအတွက် polymorphic နှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်မှု -related စရိုက်များအသင်း။ သိပ္ပံ။ 1996;274(5292): 1527-31 ။ [PubMed]
99 ။ Lesch KP, serotonin Transporter ၏ Gutknecht L. Pharmacogenetics ။ Neuro-Psychopharmacology နှင့်ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှုတိုးတက်မှု။ 2005;29(6): 1062-1073 ။ [PubMed]
100 ။ Hariri AR, Mattay VS, Tessitore A, Kolachana B, Fera F, Goldman D, et al ။ Serotonin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမျိုးရိုးဗီဇမူကွဲနှင့်လူ့ amygdala ၏တုံ့ပြန်မှု။ သိပ္ပံ။ 2002;297(5580): 400-3 ။ [PubMed]
101 ။ Surtees PG၊ Wainwright NWJ၊ Willis-Owen SAG၊ Luben R၊ Day NE၊ Flint J. လူမှုရေးမတည်ငြိမ်မှု၊ Serotonin Transporter (5-HTTLPR) Polymorphism နှင့် Major Depressive Disorder ။ ဟားဗတ်။ 2006;59(3): 224-229 ။ [PubMed]
102 ။ Caspi A၊ Sugden K၊ Moffitt TE, Taylor A, Craig IW, Harrington H စသည်တို့ဖြစ်သည်။ စိတ်ကျရောဂါအပေါ်ဘဝစိတ်ဖိစီးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: 5-HTT ဗီဇအတွက် polymorphic အားဖြင့်ဖြည့်ညှင်း။ သိပ္ပံ။ 2003;301(5631): 386-389 ။ [PubMed]
103 ။ Jacob CP၊ Strobel A၊ Hohenberger K၊ Ringel T၊ Gutknecht L, Reif A ။ serotonin Transporter function ကိုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်စပျစ်သီးပြွတ်ကို C ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက် neuroticism ၏ allelic မူကွဲအကြားအသင်းအဖွဲ့။ Psychiatry ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2004;161(3): 569-72 ။ [PubMed]
104 ။ Willis-Owen SA, Turri MG, Munafo MR, Surtees PG, Wainwright NW, Brixey RD, et al ။ အဆိုပါ serotonin Transporter အရှည် polymorphic, neuroticism နှင့်စိတ်ကျရောဂါ: အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုပြည့်စုံအကဲဖြတ်။ ဟားဗတ်။ 2005;58(6): 451-6 ။ [PubMed]
105 ။ Middeldorp CM, de Geus EJ, Beem AL, Lakenberg N, Hottenga JJ, Slagboom PE, et al ။ မိသားစုအခြေပြုအသင်းမှ Serotonin Transporter Gene Polymorphism (5-HTTLPR) နှင့် Neuroticism, Ansiety and Depression အကြားဆန်းစစ်လေ့လာသည်။ အပြုအမူမျိုးရိုးဗီဇ။ 2007;37(2): 294-301 ။ [PubMed]
106 ။ ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအတွက်မျိုးရိုးဗီဇအထောက်အပံ့ - serotonin Transporter ဗီဇ (5-HTT) နှင့်အလုပ်လုပ်သော DNA polymorphism အကြားဖြစ်နိုင်သောဆက်စပ်မှုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆက်စပ်မှု - Perez de Castro I, Ibanez A၊ Saiz-Ruiz J, Fernandez-Piqueras J. Pharmacogenetics ။ 1999 ဇွန်;9(3): 397-400 ။ [PubMed]
107 ။ ဖာဇန်ဒါအက်စ်၊ Saiz-Ruiz ဂျေ၊ ဖာနန်ဒက်ဇ -Piqueras ဂျေ၊ MAO-A ရှိရောဂါလောင်းကစားခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်သော DNA polymorphisms အကြားတစ်ပြိုင်တည်းအပြုသဘောဆောင်သောဆက်စပ်မှုနှင့် 5-HT Transporter ဗီဇများ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;7(9): 927-8 ။ [PubMed]
108 ။ Devor EJ, Magee HJ, Dill-Devor RM, Gabel J, Black DW ။ Serotonin Transporter ဗီဇ (5-HTT) polymorphic နှင့် compulsive ဝယ်ယူ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျိုးရိုးဗီဇ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 1999;88(2): 123-5 ။ [PubMed]
109 ။ Hemmings SM, Kinnear CJ, Lochner C, Seedat S, Corfield VA, Moolman-Smook JC, et al ။ trichotillomania - တောင်အာဖရိကကော့ကေးဆပ်လူ ဦး ရေအတွက်အမှုထိန်းချုပ်ရေးအသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုမှာမျိုးရိုးဗီဇဆက်စပ်မှု။ အစ္စရေးစိတ်ပညာနှင့်ဆက်စပ်သောသိပ္ပံဂျာနယ်။ 2006;43(2): 93-101 ။ [PubMed]
110 ။ Brewer JA, Grant JE, Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ကုသမှု။ စွဲရောဂါများနှင့်သူတို့၏ကုသမှု။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
111 ။ Grant JE, Odlaug BL, Potenza MN ။ Hairpulling စွဲ? Trichotillomania ၏အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကကုသမှု၏ရလဒ်ကိုမည်သို့တိုးတက်စေနိုင်မည်နည်း။ Harv ဗြာစိတ်ရောဂါကုသမှု။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။ [PubMed]
112 ။ Mick TM, ဟော်လန်ဒါးအီးစိတ်ကြွဆေး - လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ။ CNS Spectrum ။ 2006;11(12): 944-55 ။ [PubMed]
113 ။ Liu T က, Potenza MN ။ ပြနာကိုအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း - လက်တွေ့သက်ရောက်မှုများ။ CNS Spectr ။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။ [PubMed]
114 ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက် Hollander အီး, DeCaria CM, Finkell JN, Begaz T, Wong CM, Cartwright C. ။ ကျပန်းမျက်စိကန်းသော fluvoxamine / placebo crossover စမ်းသပ်မှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;47(9): 813-7 ။ [PubMed]
115 ။ Kim SW, Grant JE, Adson DE, Shin YC, Zaninelli R. ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းကိုကုသရာတွင် paroxetine ၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကို double-blind plaċebo -trolled လေ့လာမှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;63(6): 501-7 ။ [PubMed]
116 ။ Grant JE, Kim SW, Potenza MN, Blanco C, Ibanez A, Stevens L, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား Paroxetine ကုသမှု: multi- စင်တာကျပန်းထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး။ int Clin Psychopharmacol ။ 2003;18(4): 243-9 ။ [PubMed]
117 ။ Blanco, C, Petkova အီး, Ibanez တစ်ဦးက, Saiz-Ruiz ဂျေရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် fluvoxamine ၏တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;14(1): 9-15 ။ [PubMed]
118 ။ Wainberg ML, Muench F, Morgenstern J, Hollander E, Irwin TW, Parsons JT, et al ။ လိင်တူချစ်သူနှင့် bisexual ယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပြုမှုဆက်ဆံခြင်းကို citalopram နှင့်နှစ်ဆမျက်စိကွယ်ခြင်းလေ့လာခြင်း။ လက်တွေ့ Psychiatry ၏ဂျာနယ်။ 2006;67(12): 1968-73 ။ [PubMed]
119 ။ Black DW, Gabel J, Hansen J, Schlosser S. နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် fluvoxamine နှိုင်းယှဉ်မှုနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ရောဂါဝယ်ကုသမှုကုသမှု။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ရာဇဝင်။ 2000;12(4): 205-11 ။ [PubMed]
120 ။ Ninan PT, McElroy SL, Kane CP, Knight BT, Casuto LS, Rose SE, et al ။ ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလူနာကုသမှုအတွက် fluvoxamine ၏ရလဒ်များအရအိပ်ယာထိန်းချုပ်ထားသောလေ့လာမှု။ လက်တွေ့ psychopharmacology ၏ဂျာနယ်။ 2000;20(3): 362-6 ။ [PubMed]
121 ။ Bullock K ကို, compulsive ဝယ်၏ Koran L. Psychopharmacology ။ ယနေ့မူးယစ်ဆေးဝါးများ (ဘာစီလိုနာ၊ စပိန်နိုင်ငံ) 2003;39(9): 695-700 ။ [PubMed]
122 ။ Grant JE, Potenza MN ။ Co-Occurring စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ Escitalopram ကုသမှု: နှစ်ဆမျက်စိကွယ်ရပ်စဲနှင့်အတူ Open-Label ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ int Clin Psychopharmacol ။ 2006;21: 203-9 ။ [PubMed]
123 ။ Goudriaan AE၊ Oosterlaan J, de Beurs E၊ ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းတွင် van den Brink ဒဗလျူ Neurocognitive လုပ်ဆောင်ချက်များ - အရက်မှီခိုမှု၊ Tourette syndrome ရောဂါနှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ စွဲ (Abingdon, အင်္ဂလန်) 2006;101(4): 534-47 ။ [PubMed]
124 ။ Daw ND၊ O'Doherty JP၊ Dayan P၊ Seymour B, Dolan RJ ။ လူသားများအတွက်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် Cortical အလွှာများ။ သဘာဝ။ 2006;441(7095): 876-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
125 ။ O'Doherty J ကို, Kringelbach ML, Rolls ET, Hornak J ကို, လူ့ orbitofrontal cortex အတွက် Andrews က C. Abstract ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်ကိုယ်စားပြုသည်။ သဘာဝတရားမှ neuroscience ။ 2001;4(1): 95-102 ။ [PubMed]
126 ။ Stalnaker က TA, ဖရန့် TM, Singh က T က, Schoenbaum G. အ Basolateral amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည် orbitofrontal-မှီခိုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ချို့ယွင်းဖျက်သိမ်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2007;54(1): 51-8 ။ [PubMed]
127 ။ Bechara အေဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတှနျးလှနျ willpower ဆုံးရှုံး: တစ် neurocognitive ရှုထောင့်။ နတ် neuroscience ။ 2005;8(11): 1458-63 ။ [PubMed]
128 ။ Gottfried JA, O'Doherty J, Dolan RJ ။ လူ့ amygdala နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ်တန်ဖိုး encoding ။ သိပ္ပံ (နယူးယောက်, နယူးယော့။ 2003;301(5636): 1104-7 ။ [PubMed]
129 ။ Tanaka SC၊ Doya K၊ Okada G၊ Ueda K၊ Okamoto Y၊ Yamawaki S. အနာဂတ်နှင့်အနာဂတ်ဆုလာဘ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းသည် cortico-basal ganglia loops များကိုကွဲပြားခြားနားစွာစုဆောင်းသည်။ သဘာဝတရားမှ neuroscience ။ 2004;7(8): 887-93 ။ [PubMed]
130 ။ Bechara အေအန္တရာယ်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်း: စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်စွဲလမ်း။ J ကို Gamble လုံး။ 2003;19(1): 23-51 ။ [PubMed]
131 ။ Bechara A၊ Damasio AR, Damasio H, Anderson SW ။ လူ့ prefrontal cortex ကိုပျက်စီးစေခြင်းအားဖြင့်အနာဂတ်အကျိုးဆက်များအပေါ်အာရုံမခံစားနိုင်မှု။ သိမှတ်ခံစားမှု။ 1994;50(13): 7-15 ။ [PubMed]
132 ။ Bechara A, Damasio H. ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်စွဲခြင်း (အပိုင်း ၁) အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ စဉ်းစားသောအခါပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနေရသည့်ပြည်နယ်များရှိ somatic ပြည်နယ်များအားသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုအားနည်းခြင်း။ Neuropsychologia ။ 2002;40(10): 1675-89 ။ [PubMed]
133 ။ S ကပေးသနား Contoreggi ကို C, လန်ဒန် ED ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများတွင်ချို့ယွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသပါ။ Neuropsychologia ။ 2000;38(8): 1180-7 ။ [PubMed]
134 ။ လန်ဒန် ED, Ernst M က, Grant က S နဲ့, Bonson K ကို Weinstein အေ Orbitofrontal cortex နှင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်။ Cereb Cortex ။ 2000;10(3): 334-42 ။ [PubMed]
135 ။ et al Adinoff B, Devous MD, Sr, Cooper က DB, အကောင်းဆုံးအရှေ့တောင်, Chandler P ကို, Harris က T က။ ဒေသတွင်း ဦး နှောက်သွေးစီးဆင်းမှုနှင့်ကိုကင်းမှီခိုသောဘာသာရပ်များနှင့်ကျန်းမာသောနှိုင်းယှဉ်မှုဘာသာရပ်များတွင်လောင်းကစားခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာများလုပ်ဆောင်ခြင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160(10): 1892-4 ။ [PubMed]
136 ။ Tucker KA, Potenza MN, Beauvais JE, Browndyke JN, Gottschalk PC, Kosten TR ။ Perfusion မူမမှန်နှင့်ကိုကင်းမှီခိုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004;56(7): 527-30 ။ [PubMed]
137 ။ Tanabe J, Thompson က L, Claus E, Dalwani M, Hutchison K, Banich MT ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းလောင်းကစားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းများမပြုလုပ်မီ prefrontal cortex လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ 2007 [PubMed]
138 ။ Petry မိုင်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုရောဂါနှင့်အတူနှင့်မပါဘဲရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများ, လျှော့စျေးမြင့်မားတဲ့နှုန်းမှာဆုလာဘ်နှောင့်နှေး။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 2001;110(3): 482-7 ။ [PubMed]
139 ။ Potenza MN, Leung HC၊ Blumberg HP၊ Peterson BS, Fulbright RK, Lacadie CM, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ခု FMRI Stroop တာဝန်လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160(11): 1990-4 ။ [PubMed]
140 ။ Reuter J ကို, Raedler T က, နှင်းဆီ M က, လက်, ငါ Glascher J ကို, Buchel C. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်၏လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2005;8(2): 147-148 ။ [PubMed]
141 ။ et al Rogers RD, Everitt BJ, Baldacchino A, Blackshaw AJ, Swainson R, Wynne K ။ နာတာရှည် amphetamine အလွဲသုံးစားမှု, opiate အလွဲသုံးစားမှု, prefrontal cortex ဖို့ focal ပျက်စီးမှုနှင့်အတူလူနာနှင့် tryptophan- ကုန်ခမ်းပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချအသိအမှတ်ပြုအတွက် disissociic လိုငွေပြမှု: monoaminergic ယန္တရားများများအတွက်သက်သေအထောက်အထား။ Neuropsychopharmacology ။ 1999;20(4): 322-39 ။ [PubMed]
142 ။ Goldstein RZ, Tomasi: D, Rajaram S, Cottone LA, Zhang L, Maloney T, et al ။ ကိုကင်းစွဲလမ်းအတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကို processing အတွက် anterior cingulate နှင့် medial orbitofrontal cortex ၏အခန်းကဏ္.ကို။ neuroscience ။ 2007;144(4): 1153-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
143 ။ အဆိုပါ basolateral amygdala အတွက် Rainnie DG, Asprodini EK, Shinnick-Gallagher P. စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂီယာ။ neurophysiology ၏ဂျာနယ်။ 1991;66(3): 986-98 ။ [PubMed]
144 ။ အဆိုပါ basolateral amygdala အတွက် Rainnie DG, Asprodini EK, Shinnick-Gallagher P. Inhibitory ဂီယာ။ neurophysiology ၏ဂျာနယ်။ 1991;66(3): 999-1009 ။ [PubMed]
145 ။ Winstanley, CA, Theobald DE, Cardinal RN, Robbins TW ။ ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုအတွက် basolateral amygdala နှင့် orbitofrontal cortex ၏ခြားနားသောအခန်းကဏ္။ ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004;24(20): 4718-22 ။ [PubMed]
146 ။ Bechara A၊ Damasio H၊ Damasio AR, Lee GP ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လူ့ amygdala နှင့် ventromedial prefrontal cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောပံ့ပိုးမှုများကို။ J ကို neuroscience ။ 1999;19(13): 5473-81 ။ [PubMed]
147 ။ Bechara အေ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ neurobiology အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်။ 2004;62: 159-93 ။ [PubMed]
148 ။ Everitt BJ၊ ပါကင်ဆန် JA၊ Olmstead MC၊ Arroyo M၊ Robledo P၊ Robbins TW ။ စွဲနှင့်ဆုလာဘ်အတွက် Associative ဖြစ်စဉ်များ။ amygdala-ventral striatal subsystem ၏အခန်းကဏ္.ကို။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 1999;877: 412-38 ။ [PubMed]
149 ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏ Bechara အေ Neurobiology: အန္တရာယ်နှင့်ဆုလာဘ်။ လက်တွေ့ neuropsychiatry အတွက်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ။ 2001;6(3): 205-16 ။ [PubMed]
150 ။ Jueptner M, Stephan KM, Frith CD, Brooks DJ၊ Frackowiak RS, Passingham RE ။ မော်တာသင်ယူမှု၏ခန္ဓာဗေဒ။ ဗြဲရှေ့ cortex နှင့်အရေးယူမှုမှအာရုံစူးစိုက်။ neurophysiology ၏ဂျာနယ်။ 1997;77(3): 1313-24 ။ [PubMed]
151 ။ Jueptner M, Frith CD, Brooks DJ၊ Frackowiak RS, Passingham RE ။ မော်တာသင်ယူမှု၏ခန္ဓာဗေဒ။ ၂ ။ subcortical ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမှားအားဖြင့်သင်ယူမှု။ neurophysiology ၏ဂျာနယ်။ 1997;77(3): 1325-37 ။ [PubMed]
152 ။ Porrino LJ, လီယွန်: D, Smith က HR, Daunais JB, Nader, MA ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး limbic, အသင်းအဖွဲ့နှင့် sensorimotor striatal ဒိုမိန်းများအတွက်တိုးတက်သောပါဝင်ပတ်သက်မှုထုတ်လုပ်သည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2004;24(14): 3554-62 ။ [PubMed]
153 ။ Holland ကွန်ပျူတာ။ Pavlovian- ပရိယာယ်လွှဲပြောင်းနှင့်အားဖြည့်တန်ဖိုးအကြားဆက်ဆံရေး။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 2004;30(2): 104-17 ။ [PubMed]
154 ။ Haber SN, Fudge JL, McFarland ရော်ဘာ။ မျောက်ဝံများအတွက် Striatonigrostriatal လမ်းကြောင်းဟာ dorsolateral striatum ဖို့ shell ကိုတစ်ဦးထံမှတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုလိမ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2000;20(6): 2369-82 ။ [PubMed]
155 ။ Vanderschuren LJ, Di Ciano P ကို, Everitt BJ ။ cue-controlled ကင်းရှာထဲမှာ dorsal striatum ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2005;25(38): 8665-70 ။ [PubMed]
156 ။ စတိန်း RZ, Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား neuroimaging ။ Psychiatry ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2002;159(10): 1642-52 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
157 ။ Nader, MA, Daunais JB, Moore က T က, Nader SH, Moore က RJ, Smith က HR, et al ။ မျောက်တွေကိုအတွက် striatal dopamine စနစ်များအပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှု: ကနဦးနှင့်နာတာရှည်ထိတွေ့မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2002;27(1): 35-46 ။ [PubMed]
158 ။ Stein DJ၊ Chamberlain SR, Fineberg N. ABC ပုံစံအလေ့အထမမှန်ခြင်း - ဆံပင်ဆွဲခြင်း၊ အရေပြားကောက်ခြင်းနှင့်အခြားကျပုံစံများ။ CNS Spectrum ။ 2006;11(11): 824-7 ။ [PubMed]
159 ။ Potenza MN, Gottschalk C, Skudlarski P, Fulbright RK, Lacadie CM, Wilber MK, et al ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို၏ပြProbleနာများအပေါ်ကောလိပ်။ Orlando တွင် FL သည်စိတ်ရောဂါကုသမှုဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်ကိုကင်းအမှီအခိုကင်းမှုတွင်တွန်းအားပေးနေသောနိုင်ငံများ၏ ၂၀၀၅ fMRI ။
160 ။ O'Sullivan RL, Rauch SL, Breiter HC, Grachev ID, Baer L, Kennedy DN, et al ။ morphometric သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ကနေတဆင့်တိုင်းတာ trichotillomania အတွက် Basal ganglia volumes ကိုလျှော့ချ။ ဟားဗတ်။ 1997;42(1): 39-45 ။ [PubMed]
161 ။ Wallace ဘီစီ။ ကိုကင်းဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်အက်ကွဲခြင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြdeterm္ဌာန်းချက်။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုဆက်ဆံပါ။ 1989;6(2): 95-106 ။ [PubMed]
162 ။ detoxification အောက်ပါ opiate အသုံးပြုမှုမှ Bradley ကို BP, Phillips က, G, အစိမ်းရောင် L ကို, Gossop အမ်အခြေအနေများအသုံးပြုမှုကန ဦး ချုံးပတျဝနျးကငျြ။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1989;154: 354-9 ။ [PubMed]
163 ။ Cabib S, Puglisi-Allegra S, Genua C, Simon H, Le Moal M, Piazza PV ။ နေရာအသစ်အေးစက်သည့်စက်ကိရိယာတစ်ခုမှဖော်ထုတ်သည့်အမ်ဖီတမင်းဆေး၏ဆေးမှီခိုမှုနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl) 1996;125(1): 92-6 ။ [PubMed]
164 ။ Kalivas PW, ကြွက်များတွင် mesocorticolimbic dopamine neurotransmission အပေါ်နေ့စဉ်ကင်းခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု Duffy P. အလားတူအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1989;25(7): 913-28 ။ [PubMed]
165 ။ ရမ်းဆေးအဲန်အက်ဖ်, ဗန်ရိ JM ။ စိတ်ခံစားမှုရှိသော်လည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမှောက်သည့်ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းအားဖြည့်ကိုကာကိုလာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1993;608(2): 216-22 ။ [PubMed]
166 ။ Nash JF, Jr. , Maickel RP ။ ကြွက်အားဖြင့် Post- စိတ်ဖိစီးမှုသွေးဆောင်အီသနောစားသုံးမှုအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး၏အခန်းကဏ္.ကို။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1988;12(5): 653-71 ။ [PubMed]
167 ။ Volpicelli JR ။ မထိန်းချုပ်နိုင်သောအဖြစ်အပျက်များနှင့်အရက်သောက်ခြင်း။ br J ကိုစွဲလမ်း။ 1987;82(4): 381-92 ။ [PubMed]
168 ။ Brady KT, Sinha R. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်မှုများ - နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၏ neurobiological သက်ရောက်မှုများ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;162(8): 1483-93 ။ [PubMed]
169 ။ Sinha R, Talih M, Malison R, Cooney N, Anderson GM, Kreek MJ စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်နှင့်မူးယစ်ဆေး cue- သွေးဆောင်ကိုကင်းတပ်ပြည်နယ်များစဉ်အတွင်း Hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးနှင့် sympatho-adreno-medullary တုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 2003;170(1): 62-72 ။ [PubMed]
170 ။ Baumann MH, Gendron TM, Becketts KM, Henningfield JE, Gorelick DA, Rothman RB ။ လူ့ကိုကင်းအလွဲသုံးစားလုပ်သူများတွင်ပလာစမာ cortisol နှင့်ပလာပတ္တိန်အပေါ်သွေးကြောသွင်းကိုကင်း၏သက်ရောက်မှုများ။ ဟားဗတ်။ 1995;38(11): 751-5 ။ [PubMed]
171 ။ Rivier C, Vale W. Cocaine သည် corticotropin-releasing factor (CRF) -mediated ယန္တရားမှတဆင့် adrenocorticotropin (ACTH) ထုတ်လွှတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်သည်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1987;422(2): 403-6 ။ [PubMed]
172 ။ Swerdlow NR၊ Koob GF၊ Cador M၊ Lorang M၊ Hauger RL ။ ကြွက်များတွင်စူးရှသော amphetamine မှ Pituitary-adrenal ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှု။ ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အပြုအမူ။ 1993;45(3): 629-37 ။ [PubMed]
173 ။ Mendelson JH, Ogata M, Mello NK ။ adrenal function ကိုနှင့်အရက်။ ဗြဲသွေးရည်ကြည် cortisol ။ Psychosomatic ဆေးဝါး။ 1971;33(2): 145-57 ။ [PubMed]
174 ။ Sarnyai Z, Shaham Y, Heinrichs SC ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် Corticotropin-Release Factor ၏အခန်းက္ပ။ Pharmacol ဗျာ 2001;53(2): 209-244 ။ [PubMed]
175 ။ McIntyre IM, Norman TR, Burrows GD, Armstrong SM ။ လူသားများညနေခင်း alprazolam အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်ပလာစမာ melatonin နှင့် cortisol သို့ပြောင်းလဲမှုများ။ Chronobiology နိုင်ငံတကာ။ 1993;10(3): 205-13 ။ [PubMed]
176 ။ Imperato A၊ Angelucci L, Casolini P, Zocchi A, Puglisi-Allegra S. စိတ်ဖိစီးမှုများစဉ်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအတွင်းနှင့်အောက်ပါ limbic dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1992;577(2): 194-9 ။ [PubMed]
177 ။ McCullough LD, Salamone JD ။ microdialysis နှင့်အပြုအမူလေ့လာမှု: နျူကလိယ၏ပါဝင်မှုသည် Periodic အစားအစာတင်ဆက်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်မော်တာလှုပ်ရှားမှုအတွက် dopamine accumbens ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 1992;592(12): 29-36 ။ [PubMed]
178 ။ Sinha R ကို, Lacadie ကို C, Skudlarski P ကို, Fulbright RK, Rounsaville BJ, Kosten TR, et al ။ စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်ကိုကင်းတပ်နှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2005;183(2): 171-80 ။ [PubMed]
179 ။ Muraven M က, Baumeister RF ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်ကန့်သတ်ထားသောအရင်းအမြစ်များလျော့နည်းသွားခြင်း - ချုပ်တည်းမှုသည်ကြွက်သားနှင့်တူသလား။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 2000;126(2): 247-59 ။ [PubMed]
180 ။ Brewer JA, Grant JE, Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ Neurobiology ။ ခုနှစ်တွင်: Smith က, G, Hodgins: D, ဝီလျံ R ကို, အယ်ဒီတာများ။ လောင်းကစားလေ့လာရေးအတွက်သုတေသနနှင့်တိုင်းတာခြင်းပြIssနာများ။ Elsivier; San Diego မှ: စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
181 ။ Meyer, G, Hauffa BP, Schedlowski M, Pawlak C, Stadler MA, Exton MS ။ ကာစီနိုလောင်းကစားခြင်းသည်လောင်းကစားသမားများတွင်နှလုံးရောဂါနှင့်တံတွေး cortisol ကိုတိုးပွားစေသည်။ ဟားဗတ်။ 2000;48(9): 948-953 ။ [PubMed]
182 ။ Krueger THC, Schedlowski M, Meyer G. Cortisol နှင့်ကာမကာစီနိုလောင်းကစားခြင်းအတွင်း Impulsivity နှင့်ဆက်စပ်သောနှလုံးခုန်နှုန်းတိုင်းတာမှုများ။ Neuropsychobiology ။ 2005;52(4): 206-211 ။ [PubMed]
183 ။ et al Meyer, G, Schwertfeger J ကို, Exton က MS, Janssen OE, Knapp W က, Stadler MA ။ ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများအတွက်လောင်းကစားရုံလောင်းကစားခြင်းကို Neuroendocrine တုံ့ပြန်မှု။ Psychoneuroendocrinology ။ 2004;29(10): 1272-1280 ။ [PubMed]
184 ။ ဂျွန်ဆင် SW, မြောက်အမေရိက RA ။ Opioids ဒေသခံ interneurons ၏ hyperpolarization အားဖြင့် dopamine အာရုံခံ excite ။ J ကို neuroscience ။ 1992;12(2): 483-488 ။ [PubMed]
185 ။ Margolis EB, Hjelmstad GO, Bonci A, Fields HL ။ Kappa-opioid agonists များသည် midbrain dopaminergic neuron များကိုတိုက်ရိုက်တားစီးသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2003;23(31): 9981-6 ။ [PubMed]
186 ။ Ford CP, Mark GP, Williams JT mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် opioid တားစီးပစ်မှတ်တည်နေရာအရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006;26(10): 2788-97 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
187 ။ Hall FS, Li XF, Goeb M, Roff S, Hoggatt H, Sora I, et al ။ Congenic C57BL /6mu opiate receptor (MOR) နောက်ကောက်ကြွက်များ - အခြေခံနှင့် opiate သက်ရောက်မှုများ။ မျိုးဗီဇ, ဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ။ 2003;2(2): 114-21 ။ [PubMed]
188 ။ Bond C, LaForge KS, Tian M, Melia D, Zhang S, Borg L, et al ။ လူ့ mu opioid receptor ဗီဇအတွက် Single- ဘေ့ polymorphic beta-endorphin စည်းနှောင်နှင့်လှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲ: opiate စွဲဘို့ဖြစ်နိုင်သမျှသက်ရောက်မှု။ အမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 1998;95(16): 9608-13 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
189 ။ Oslin DW, Berrettini WH, O'Brien CP ။ အရက်သေစာမှီခိုမှုအတွက်ကုသမှုများကိုပစ်မှတ်ထားခြင်း: naltrexone ၏ pharmacogenetics ။ စွဲဇီဝဗေဒ။ 2006;11(34): 397-403 ။ [PubMed]
190 ။ Shinohara K, Yanagisawa A, Kagota Y, Gomi A, Nemoto K, Moriya E, et al ။ Pachinko ကစားသမားအတွက်ဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုများ; beta-endorphin၊ catecholamines၊ ကိုယ်ခံအားစနစ်နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်း။ Apple ကလူ့သိပ္ပံ။ 1999;18(2): 37-42 ။ [PubMed]
191 ။ Tamminga, CA, Nestler EJ ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား: လှုပ်ရှားမှုမဟုတ်, စွဲအာရုံစိုက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;163(2): 180-1 ။ [PubMed]
192 ။ O'Brien CP ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်ဆေးတိုက်ကျွေးသောဆေးများ - ဖြစ်နိုင်သောစိတ်အသစ်သောအတန်းအစားအသစ်များ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;162(8): 1423-31 ။ [PubMed]
193 ။ Kim က SW, Grant က je, Adson DE, ရှင် YC ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုကို Double-မျက်စိကန်း naltrexone နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;49(11): 914-21 ။ [PubMed]
194 ။ je, Potenza MN, Holland, E, et al Cunningham-Williams က R ကို, Nurminen T က, Smits, G, ပေးသနား။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှုထဲမှာ opioid ရန် nalmefene ၏ပေါင်းစုံပါစုံစမ်းစစ်ဆေး။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;163(2): 303-12 ။ [PubMed]
195 ။ Raymond NC, Grant JE, Kim SW, Coleman E. naltrexone နှင့် serotonin တို့မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကုသမှု - ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်နှစ်ခု။ နိုင်ငံတကာလက်တွေ့ psychopharmacology ။ 2002;17(4): 201-5 ။ [PubMed]
196 ။ Ryback RS ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ကုသမှုအတွက် Naltrexone ။ လက်တွေ့ Psychiatry ၏ဂျာနယ်။ 2004;65(7): 982-6 ။ [PubMed]
197 ။ Braff DL, Freedman R, Schork NJ, Gottesman II ။ ရှုပ်ဖိုနီးယားကိုဖျက်သိမ်းခြင်း - ရှုပ်ထွေးသောရောဂါတစ်ခုကိုနားလည်ရန်အတွက် Endophenotypes ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။ Schizophr Bull ။ 2007;33(1): 21-32 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
198 ။ Gottesman II ကို, သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် TD ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုအတွက် Endophenotype Concept: အင်္ဂလိပ်နှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ရည်ရွယ်ချက်များ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160(4): 636-645 ။ [PubMed]